ပုရိသတို့ရဲ့ နှငျး – My Blog
Credit-ဇရေဲ – ကနြေျာ့နာမညျကဇရေဲပါ ခငျတဲ့သူတှကေ ကိုဇလေို့ချေါကွသလို ကိုရဲလို့လဲချေါကွတယျ ကနြျောကအလုပျတော့ မယျမယျရရမရှိပမေယျ့အိမျကမိသားစုကုနျစုံဆိုငျလေးမှာမိဘတှကေိုကူပွီးဘဝကိုဖွတျသနျးနသေူတဈယောကျပေါ့ အားတဲ့အခြိနျ တှမှောတော့အခဈြတက်ကသိုလျကွီးကိုဝငျပွီးဟိုဖတျဒီကွညျ့နဲ့ အလုပျဝိုငျးလုပျလိုကျနဲ့တဈနတေ့ဈနအေ့ခြိနျတှကေုနျနတောပေါ့ ကနြျောကအရငျကတညျးကဆံပငျရှညျကောငျမလေးတှဆေိုအရမျးသဘောကတြာ အဲလိုဆံပငျရှညျမလေးတှကေိုသာပိုငျဆိုငျရရငျ ခဈြရရငျဆိုပွီးတဈနတေ့ဈနေ့ စိတျကူးရငျးနရေတာပေါ့ ပွီးတော့တက်ကသိုလျထဲကသူတို့ ခဈြသူတှေ မိနျးမတှကေို ပုံတှမြှေပေးတာ တှကေိုလဲ အရမျးသဘောကတြာ အဲလိုနဲ့တဈနတေ့ော့ဆံပငျရှညျမလေးတဈယောကျရဲ့ပုံကို ကြောငျးထဲက ညီကိုတဈယောကျက တငျလိုကျတော့အဲတာကို အရမျးသဘောကပြွီး ပုံလေးတှထေပျတငျပေးဖို့ ကို သှားတောငျပွောခဲ့သေးတာ အဲ့ဒီမှာပဲ ကနြေျာ့ဘဝ ထဲကို နှငျးဆိုတဲ့ကောငျမလေး ဝငျရောကျလာခွငျးရဲ့ အစတဈခု ဖွဈလာတော့တာပေါ့ဗြာ ကနြျောတငျလိုကျတဲ့ စာကိုကြောငျးထဲက ညီကိုတဈယောကျက မွငျသှားပွီ သူလဲ ဆံပငျရှညျမလေးတှနေဲ့ ကှတျကိုး ကို အရမျသဘောကတြယျဆိုတာကို PM ပို့လာခဲ့တာ တှေ သူ့နဲ့ကနြျောနဲ့ အပွနျအလှနျစကားပွောရငျးခငျမငျသှားပွီ တဈရကျတော့ သခြောလေးစကားပွောဖွဈခဲ့တာပေါ့ဗြာ
“Hi bro” လို့ messenger အသံတဈခုကွညျ့လိုကျတော့ ဟိုနကေ့မှ add ထားတဲ့ ညီကိုပါလား
me: “Hi bro ကနြျောတို့လဲ အခုမှ ပဲ ဝါသနာတူတှေ သခြောရငျးနှီးပွီးပွောဖွဈတော့တယျ” “ဟုတျတယျဗြာ ကနြျောလဲ ဆံပငျရှညျနဲ့ ကှတျကိုး ကွိုကျတာခငျြးတူတော့ လာပွောဖွဈတာ”
me: “ဆံပငျရှညျကတော့ အရမျးကွိုကျတာ ဆံပငျရှညျကွီး ကို တဈခါပဲ ပတျ လိုးဖူးသေးတယျ ဗြာ” “အေးဗြာ ကြှနျတေျာ့ကတော့ စျောရဲ့ ဆံပငျနဲ့ပဲ လုပျဖူးတယျ ကြှနျတေျာ့စျောရဲ့ ဆံပငျက တငျပါးကြျောရုံလေးပဲ ရှိတာ ဆံသားကွီး ပွီး အုံထူတယျ ဖွောငျ့တယျ ဒါပမေယျ့ ဆံသားကွမျးတယျဗြ ဆံသားနုနုလေးနဲ့ ဆံနှယျရှညျကောငျမလေးတှကေိုတော့ သဘောကြ မိပါတယျ”
me: “ဆံသားနုနု အုံထူထူ သာဆိုလို့ကတော့ဗြာ ကောငျးလိုကျမယျ့ဖွဈခငျြး တငျပါးကြျောဆိုတော့ ကောငျးတာပေါ့ အတျောပဲ ကနြျောက အဲလောကျပိုကွိုကျတယျ အကိုကံကောငျးတာပေါ့ ဆံပငျရှညျ စျောလေးရပွီး သူ့ဆံပငျကို ပတျလိုးလို့ရတယျ ဆိုတော့” “ဆံသားကတော့ အထူကွီးပဲ bro ရေ လီးကိုပတျလိုကျရငျ ဒဈပဲပျေါတယျ ကနြျောကတော့ဆျောကို တခွားဘဲနဲ့ ကုနျးစေ ခငျြတာ စညျးရုံးထားတာတော့ အဆငျပွနေပေမေယျ့ တကယျအဆငျပွမေယျ့သူကို မတှသေ့ေးတော့ မလုပျဖွဈသေးဘူးဗြ စမယျစ မယျနဲ့ မစဖွဈတာ အဲ့မှာလေ ကနြေျာ့ကောငျမလေး ဆံပငျပုံလေး”
me: “ဟာ အကို့စျော အသားအရညျလဲလှ လူလဲ လှမှာဗြ ဆံပငျ လဲ အတျောလှတယျဗြ ကနြျောသူ့ဆံပငျလေးကို ကိုငျပွီးတော့ အရမျးကို အားရအောငျ နမျးရှိုကျခငျြတယျဗြာ ပွီးတော့ သူဆံပငျ လေးကို လီးမှာပတျပွီးတော့ အသာလေး ပှတျပွီး ထုခငျြသေးတာ ပွီးတော့ အဲလို လေး ထုနရေငျး သူအဖုတျတဈခုလုံး ကို အားရ အောငျ နမျးပေး ယကျပေးခငျြလိုကျတာဗြာ သူ့ဆံပငျလေးတှေ လိုးနရေငျးနဲ့ အရမျးကောငျးလာရငျ လေ သူလီးစုပျပေးတာလေးခံ ရငျး သူ့အဖုတျရညျတှေ တဈစကျမကနျြ သောကျပေးခငျြတာဗြ သိလား ပွီးတော့ သူ့ ဆံပငျလေးတှေ ပျေါကိုလေ ကနြျော ပနျးပဈ ပွီး ဆံပငျအနှံ သုတျလိမျးပေးခငျြတယျ ပွီးတော့ ကနြျော ဘီးနဲ့ သခြောလေး ဖီးပွီးတော့ အကိုလိုးတာလေးကို ကွညျ့ခငျြတာ ကြ နျောက သူ့ဆံပငျလေးတှကေိုငျပွီးတော့ သူ့ပါးစပျထဲ လီးထညျ့ထားခငျြတာဗြ”
me: “အကို စိတျတော့မရှိနဲ့ဗြာ ပုံတှလေို့ မနနေိုငျဖွဈသှားတာ ဆောရီးပဲ” “မဟုတျတာဗြာ ကွိုကျတယျဗြာ ကနြေျာ့စျောလေးကို bro ကိုလိုးစခေငျြတဲ့စိတျတောငျဖွဈလာပွီ ကနြေျာ့စျောကလညျး အထနျလေးဗြ ကနြျောသငျပေးထားလို့ အောကားထဲက စျောတှေ လို လီးစုပျတတျတယျ bro လီးကိုဆံပငျနဲ့ပတျပွီး ထုပေးရငျး လီးစုပျပေးတာ ကွညျ့ခငျြတယျဗြာ bro အရမျးကောငျးပွီး ကနြေျာ့ စျော ပါးစပျထဲ ပီးသှားရငျလညျး ကနြေျာ့ရှတေ့ငျ လရညျသောကျခိုငျးခငျြတာ bro နဲ့ ကနြေျာ့စျောလေးကို အားရပါးရ လိုးလို့ သူ့ ဆံပငျတှေ ရမျးခါနမှော bro လရညျတှေ သူ့ဆံပငျပျေါကို ရှဲနအေောငျ ပနျးခရြငျ ကွညျ့လို့ကောငျးလိုကျမှာဖွငျ့ဗြ ကနြေျာ့ရှတေ့ငျ မဟုတျဘူး ကနြေျာ့ကှယျရာမှာလညျး ကနြေျာ့စျောလေးကို လိုးပါဗြာ အားရပါးရသာ လိုးပါ သူ ဘယျလိုအလိုးခံခဲ့တယျဆိုတာ သူ ပွနျပွောပွတာလေးလညျး နားထောငျခငျြတာဗြ သူ bro နဲ့ ဘယျလောကျထနျပွီး ဘယျလိုတှကေုနျးခဲ့တာပေါ့ဗြာ bro လီးကို စုပျခဲ့ တဲ့ သူ နှုတျခမျးလေးကို အနမျးတှပေေးရငျး နားထောငျခငျြတာ bro ကနြေျာ့စျောလေးကို ထူးထူးဆနျးဆနျးလုပျခငျြတာလေးတှေ bro လိုးခငျြတဲ့ လုပျခငျြတာလေးတှေ ဥပမာ ဖငျလိုးခငျြတာလိုမြိုးပေါ့ဗြာ ကနြျောစျောလေးကို အတှအေ့ကွုံအသဈတှပေေးခငျြ တာဗြ”
me: “အဲလိုဆို ကနြျောတို့ အဆငျပွနေိုငျမယျ ထငျတယျဗြ စျောကို ပွောကွညျ့ပါလား အကို သူသာလကျခံတယျဆို ကနြျောတို့ အပွငျမှာခြိနျးပွီး စကားလေး ဘာလေး ပွောကွညျ့တာပေါ့ဗြာ ကနြျောက အကိုလကျခံနိုငျမှုနဲ့ သူလကျခံနိငျတာကို ကွညျ့ပွီး တဈခုခုဖွဈလာမယျဆိုကနြျောကော အကိုပါ စိတျခမျြးသာရမယျ လို့ ထငျတာပဲ” “အေးဗြာ အဲတာဆိုကနြျောသူ့ကို ပွောကွညျ့ လိုကျမယျလေ သူလဲလကျခံပွီးသားပါ ပွနျတော့ပွောကွညျ့မယျ အဆငျပွရေငျပွနျပွောမယျဗနြျော bye”
me: “bye bro” အဲလိုနဲ့ သူနဲ့ ကနြျောစကားတှပွေောခငျြခဲ့ပွီး သူပို့ထားတဲ့ ဆံပငျရှညျ သူ့စျောလေးပုံကိုကွညျ့ရငျးနဲ့ တဈကွောငျး လောကျတော့ အရသာခံပွီးထုဖွဈခဲ့တာပေါ့ သူ့စျောလေးဆံပငျရှညျလေးကိုပတျပွီး ထုခှငျ့ကိုသာရမယျဆိုလို့ တှေးတှေးပွီး သူ စာပွနျလာမယျ့နလေ့ေးကို စောငျ့နမေိတော့တာပေါ့ ဒီနကြေ့ျောကြျောအရမျးစိတျလှုပျရှားနသေလို ဘာဆကျလုပျသငျ့လဲဆိုတာ သခြောတှေးမိနသေညျ၊ မွကြှနျးညိုထဲမှတဈဆငျ့ သူစိမျးတဈယောကျနဲ့အပွနျအလှနျ ကှတျကိုးနှငျ့ဆံပငျရှညျကွိုကျတာခငျြးတူလို့ စာအပွနျအလှနျပို့ပွောရငျး Facebook မှတဈဆငျ့ သူ့ခဈြသူဆံပငျရှညျမလေးပုံလေးတှကေိုပွပွီးအလိုးခံနရောကိုသူကွညျ့ခငျြ ကွောငျးကွားခငျြကွောငျး ထိုသူကိုပွောပွခဲ့ပွီးပွီဆိုတော့ တကယျပဲသူ့ခဈြသူကောငျမလေးကိုထိုသူနဲ့လိုးမှာကိုသူ အကောငျအထညျဖျောခငျြစိတျတှလေဲ တဈဖှားဖှားဖွဈနတေော့သညျ၊ ရုံးဆငျးခြိနျရောကျသညျနှငျ့ သူစိတျတှအေရမျးစောနပွေီး သူ့ ခဈြသူလေးရှိရာကို အမွနျဆုံးအပွေးလာခဲ့မိတော့သညျ။
ဟိုတှေးဒီတှေးနှငျ့ ခဈြသူလေးအလုပျရှိရာကိုစောရောကျနပွေီး အလုပျဆငျးလာတာလေးကိုစောငျ့နတေုနျး “ကိုကို…ကိုကြျော ရေ…..ကိုကိုရေ..!!” “အမလေး ဟာနှငျး လနျ့လိုကျတာကှာ အရမျးကွီးအျောလိုကျတာ” “အံမာ ကိုကိုကဘာတှတှေေးပွီးဘယျ တှငေေးနတောလဲ မှနျမှနျပွောစမျး ကောငျမလေးတှကေိုငမျးပွီး တှေးနတောမဟုတျလား” “မဟုတျရပါဘူးနှငျးရယျ ကိုကို က နှငျး ကိုပဲအရမျးခဈြတာကိုတှေးလဲ နှငျးအကွောငျးပါပဲ” “ကိုကိုက ပိုပွီ တကယျပဲ အခြှဲလေး လုပျခငျြနတောလား နှငျးက မခြှဲရဘူး ဟှနျ့” “နှငျး အလုပျပွီးပွီဆိုကိုကိုတို့သှားကွရအောငျ အခြိနျလေးရှိတုနျး လာ နှငျး” “ဟငျ ဘယျသှားဖို့လဲကိုကိုရဲ့ ကိုကိုပဲ ညနလေုပျ စရာရှိလို့ နှငျးကို အိမျပွနျပို့ပွီး သှားရမယျဆို” “ခုက အဲတာအားလုံးထကျအရေးကွီးတာ နှငျးကို ခဈြခငျြနတော အခဈြဆုံးရဲ့လာ ကိုကို ဟိုတယျအခနျး booking လုပျထားတယျ” “ကိုကိုကလဲ ဇှတျပဲ ဘာစိတျကူးတှပေေါကျလို့လဲ ကိုကိုရဲ့” “လာပါ နှငျးရာ မေးမ နပေါနဲ့ နှငျးကို ခဈြခငျြလို့ အရမျးလိုးခငျြနလေို့ ကိုကို့ ခဈြသူလေးကို” “ကိုကိုကလဲ ထူးထူးဆနျးဆနျး အရမျးကဲနပေါလား သူမြား တှေ ကွားသှားမယျ ကဲကဲ သဘောပါရှငျ သှား သှား ဟုတျပွီလား” ကြျောကြျောလဲ ခဈြရသူလေးလကျကိုကိုငျပွီး အမွနျ Taxi တဈ စီးတားလိုကျပွီး ဟိုတယျ ကိုဦးတညျလိုကျတော့တယျ၊ နှငျးကိုရငျခှငျထဲထညျ့ထားရငျး ခဈြရသူလေးကို သခြောထပျစညျးရုံးဖို့ အတှကျတှေးနမေိတော့တယျ။
နှငျးပှငျ့လှာ တဈယောကျ ကိုကြျော ဘာတှဖွေဈနလေဲဆိုတာ တှေးမရဖွဈနတေယျ၊ ကိုကိုက အမွဲမပွောမဆိုနဲ့လုပျတာဘာမှမရှိပါ ပဲခုခကျြခငျြးသူ့ကိုဟိုတယျကိုချေါသှားတော့ထူးဆနျးနတေော့တယျ၊ ကိုကိုကသူ့ကိုခဈြသူဖွဈကတညျးကခဈြစနိုးနဲ့မွတျနိုးလို့ နှငျး လို့ အမွဲချေါတာလေ အရငျကလဲရညျးစားတှထေားဖူးတယျဆိုပမေယျ့ကိုကိုကတော့နှငျးကိုအရမျးခဈြတာ နှငျးကလဲကိုကို့ကိုအရမျး ခဈြတော့ကိုကိုဖွဈစခေငျြတာတှကေိုအမွဲသူဖွညျ့ဆညျးဖို့ကွိုးစားတယျ ကိုကိုနဲ့မှထူးဆနျးတာတှကေိုသူလဲကွုံတှရေ့တာတှမြေား တယျ တဈခါမှမတှေးမိတာတှပေေါ့။ အရငျခဈြသူတှနေဲ့တုနျးကလဲနှငျးအဖုတျလေးကိုယကျပေးတာ နှငျးကိုလိုးတာ နောကျ နှငျးကို သူတို့လီးတှကေိုစုပျခိုငျးတာတှေ ရှိခဲ့ဖူးပမေယျ့ ကိုကိုကမတူဘူးလေ၊ နှငျးကိုလီးစုပျခိုငျးတုနျးကလဲ ဒီတိုငျးစုပျခိုငျးတာတှေ မဟုတျပဲ နိုငျငံခွားဟိုကားတှထေဲကမငျးသမီးတှလေို ဥတှယေကျတာနမျးတာတှေ နောကျသူ့လီးကိုယကျလိုကျစုပျလိုကျနဲ့လုပျခိုငျးတာတှေ လီးတဈခြောငျးလုံးကို အရငျးထိဖိစုပျခိုငျးတာတှစေုံစိနအေောငျကို သခြောသငျပေးပွီးလုပျခိုငးတာ၊ နှငျးလဲ ကိုကို့ကြေးဇူး ကွောငျ့နိုငျငံခွားကားထဲကမငျးသမီးတှထေကျကိုလီးစုပျတာတျောတျောကြှမျးနပွေီ နောကျတော့လိုးတာမှ ပုံစံမြိုးစုံ နရောမြိုးစုံမှာ ကိုလုပျတာ နှငျးလဲကိုကိုနဲ့မှ အရှကျဆိုတာ မရှိအောငျကိုကုနျတော့တာပဲ။
ခုတဈလောပိုဆိုးတာက သူနဲ့လိုးနတေုနျး နှငျးအဖုတျကို နှငျးကွိုကျတဲ့ဘယျမငျးသားကယကျပေးရငျဘယျလိုခံစားရလဲ နှငျးအရငျ ရညျးစားကိုခုလီးပွနျစုပျပေးရရငျဘယျလိုနမေလဲ နှငျးအဖုတျကိုတဈခွားသူကလိုးနရေငျနှငျးစိတျထဲ ဘယျလိုခံစားရလဲနဲ့ မေးမေး နတေော့တာလေ။ စစခငျြးတော့နှငျးစိတျဆိုးပမေယျ့ကိုကိုက ခံစားမှုအသဈဆိုပွီး နှငျးကိုပွောတော့နှငျးလဲသာယာမိတာလေးတှေ ဖွဈဖွဈလာတယျ၊ ကိုကိုနဲ့လိုးရငျး တဈခွားသူလိုးနသေလိုခံစားတတျလာတယျလေ ကိုကိုကတော့ အဲတာ ကှတျကိုး ခံစားခကျြလို့ ပွောတာပဲ နှငျးကတော့နားမလညျပါဘူး ကိုကို စိတျခမျြးသာရငျနှငျးကတော့ကိုကိုအတှကျဘာမဆိုလုပျပေးမှာပဲလေ၊ ခုလဲ ကိုကို ခဈြပေးတာကိုခံရတော့မှာကို သိနလေို့ကိုကို့ရငျခှငျထဲမှီရငျးအရညျလေးတှတေောငျစို့လာနတောပေါ့ နှငျးလဲအတှေးတှမြေားနေ တုနျး “နှငျး ရောကျပွီဆငျးမယျလေ ဘာတှတှေေးနတောလဲ အခဈြရဲ့” “ရောကျပွီလားကိုကို နှငျးလဲ ဟိုတှေးဒီတှေးနဲ့ရောကျမှနျး ကိုမသိလိုကျဘူးဖွဈသှားတာ” “လာနှငျး အခနျးထဲ သှားရအောငျ” “ဟုတျကိုကို” အခနျးထဲ ရောကျရောကျခငျြးပဲ ကိုကြျောတဈ ယောကျ ခဈြသူလေးနှငျးကို သခြောကွညျ့လိုကျတော့ ဒီနအေ့ရမျးတှလှေနတေော့တယျ နှငျးတို့အလုပျက ယူနီဖောငျးကနျ့သတျခကျြ မရှိတော့ ဒီနနှေ့ငျး ဂါဝနျလေးနဲ့ ပွီးတော့ သူ့တငျပါးထိရောကျတဲ့ ဆံပငျရှညျလေးကိုဖွနျ့ထားတော့ အရမျးဆှဲဆောငျမှုရှိနတေယျ
ကိုကြျောလဲ စိတျမထိနျးနိုငျတော့ပဲ အခနျးထဲရောကျရောကျခငျြး နှငျးကိုဆှဲပှခြေီ့လိုကျပွီး ကုတငျပျေါတငျလိုကျတော့တာပေါ့ ပွီး တော့ နှငျးဂါဝနျကိုဆှဲလှနျပွီး နှငျးအဖုတျလေးကို လကျနဲ့ကလိရငျး နှငျးကိုနမျးပဈလိုကျတော့သညျ “အို ကိုကို ဘယျလိုဖွဈတာလဲ နပေါဦး ကိုယျလကျဆေးပွီး အဝတျတှခြှေတျပါရစဦေး” “မရတော့ဘူး နှငျးရယျ နှငျးလဲ အရညျလေးတှစေို့နတောကိုး ကိုကိုလိုး ပေးတာခံခငျြနတောပေါ့ ဟုတျလား အခဈြရဲ့ ကိုကိုကတော့မနနေိုငျတော့ဘူးကှာ” အထိအတှကေို့မလှနျဆနျနိုငျသော နှငျးမှာလဲ ကာမစိတျမြား တဈဟုနျထိုးတတျလာပွီး ကိုကိုကတော့ နှငျးရဲ့ စောကျစိလေးကို ပှတျကာခပြေေးရငျး နှုတျခမျးကို နမျးနေ တော့သညျ၊ စောကျစိလေးကို ကလဲအရမျးတဈဆဈဆဈနဲ့ ကောငျးလှနျးတာကွောငျ့ နှငျးခဗြာကိုကို့ နှုတျခမျးတှကေို မလှတျတမျး ပွနျပွီးနမျးနမေိတော့တယျ။ ကိုကိုကအနမျးမြားကို ရပျလိုကျပွီး နှငျးပငျတီလေးကို ခြှတျကာ ပေါငျနှဈဖကျကိုဆှဲဖွဲပွီး နှငျးအဖုတျ လေးကို လြှာဖြားလေးနှငျ့ ပငျ့ကာ ယကျပေးလိုကျ နှငျးအဖုတျနှုတျခမျးသားတှကေို စုပျလိုကျနမျးလိုကျနဲ့ နှငျးကလဲ ကာမစိတျမြား တရိပျရိပျပိုပို တကျလာပွီး အဖုတျလေးတဈခုလုံးလဲ စောကျရညျမြားရှဲစိုလာတော့သညျ၊ ကိုကို့ရဲ့ ကာမခလုတျတှေ နိုးစှတာ က နှငျး အတှကျအရမျးကောငျးလှနျးတာကွောငျ့ နှငျးလဲ ဂါဝနျနဲ့ ဘျောလီတှကေို ဆှဲခြှတျပွီး ကိုကို အကွိုကျ ဆံပငျရှညျတှကေို ကုတငျပျေါ ဖွနျ့ထားလိုကျပွီး နို့တှကေို ဆှဲညှဈကာ ခါးကို ကော့ကာ ကော့ကာ ပေးပွီး ကိုကိုယကျပေးတာကို အပွညျ့အဝ ခံစားနမေိ တော့သညျ။
“ကိုကိုရယျ….. ဘယျလိုတှတေောငျလုပျတတျတာလဲကှာ…….နှငျးအရညျတှအေရမျးထှကျနပွေီကှာ……. ကိုကိုရယျ…ကောငျးလိုကျ တာ…အား အ ဖိစုတျ‌ပေးပါကိုကိုရယျ အစလေ့ေးကိုလဲ …ကောငျးလိုကျတာကိုကိုရယျ…အရမျးကောငျးတယျကှာ” “အား… အ..အငျ့…အဟငျ့ ….ကောငျးလိုကျတာ…ဖိယကျပဈ ကိုကို… အား….ကောငျးတယျ အ….အိ….” ကိုကိုကတော့ စောကျစိလေးကို ဖိ ဖိယကျနပွေီး စောကျဖုတျလေးထဲသို့ လကျနှဈခြောငျးပူးထညျ့ကာ ထိုးထညျ့လိုကျတော့သညျ။ “အား…ကောငျးလာပွီ…ကိုကို ရယျ…အ..လုပျပါ…အစလေ့ေးကိုစုပျ…ဟုတျတယျ..ဖိစုပျပေး…ကိုကိုလကျနဲ့လိုးပေး…ကောငျးလိုကျတာ.. အား….အား….အ… အငျး…. လုပျပါကိုကိုရယျ…နှငျးအရမျးကောငျးလာပွီ…ပွီးတော့မယျ…ကားပျေါမှကတညျးကခံခငျြနတော..လုပျပါ…အား….ပွီး ပွီ..ကိုကိုရယျ…အ.အ. ပွီးပွီကှာ..အဟငျ့…အား…” နှငျးခဗြာ နို့တှကေိုဖိညှဈဆှဲရငျး ခါးကို ဆကျတိုကျဆကျတိုကျ ကော့တငျကာ ကိုကို့ခေါငျးကို ပေါငျနှငျ့ညှပျရငျး အရညျတှေ ရှဲနအေောငျထှကျကာ ကာမရဲ့ အမွငျ့ဆုံး ပွီးဆုံးခငျြးကို ရောကျသှားပါတော့သညျ၊ ကိုကိုက နှငျးပွီးသှားတော့မှ နှငျးနှုတျခမျးလေးကို အဖုတျရညျမြားပနေသေော သူ့နှုတျခမျးဖွငျ့ မကျမကျမောမော လာနမျးပေးပွီး နှငျးကလဲ နှငျး အဖုတျရညျမြားနှငျ့ စိုနသေော့ကိုကို့နှုတျခမျးကို ဖိစုပျကာနမျးရငျး အမောဖွနေပေါတော့သညျ။ ကြျောကြျောလဲ သူ ယကျပေးတာကိုခံပွီး အရမျးဟော့ကာ ပွီးသှားသောနှငျး နှုတျခမျးလေးကို နမျးရငျး ထရပျလိုကျသညျ၊ နှငျးကတော့ သူ့ကို ခဈြရညျ လဲ့သော အကွညျ့မြားနှငျ့ ကွညျ့နပေါတော့သညျ၊ ကြျောကြျော လဲ ဒီနတေ့ော့နှငျးကိုတဈခွားသူနှငျ့တကယျအလိုးခံရသလိုခံစားရ အောငျလိုးပေးပွီး နှငျးကိုအပွငျမှာတကယျ သူစိမျးနှငျ့လိုးခငျြစိတျဖွဈလာအောငျ လုပျမညျ ဟုဆုံးဖွတျလိုကျတော့သညျ။
“နှငျး အခဈြ ကောငျးရဲ့လားဟငျ ကိုကို ယကျပေးတာ” “ကိုကိုရယျ ကောငျးတာမှ နှငျးအဖုတျလေးနဲ့ ကိုကို့ လြှာလေးကပျသာထား လိုကျခငျြတော့တယျ ကိုကို သိလား” “ကဲ နှငျးအရမျးကောငျးသှားပွီဆိုတော့ ကိုကို့ ကို ဘယျလို ကြေးဇူးပွနျဆပျမှာလဲ ပွော မဟုတျရငျ ကိုကို က မလုပျပေးတော့ပဲ နလေိုကျမှာ” “ကိုကိုရယျ အဲလိုတော့ မလုပျပါနဲ့ ကိုကိုသာမလုပျပေးတော့ရငျ နှငျးတော့ ခံ ခငျြလှနျးလို့ သတေောငျ သမေလား မသိဘူး ကိုကို့သဘော နျော ကိုကို ဘာဖွဈစခေငျြလဲ ပွော” “အဲတာဆို ကိုကို အရငျက နှငျးကို ပွောဖူးသလိုလေ နှငျးကို တဈခွားလူနဲ့လိုးတာလေးကို ကိုကို သဘောကတြယျလို့ ပွောတာ အဲဒါအခု နှငျးက ကိုကို့ ကို ကိုကို မဟုတျပဲ တဈခွားလူလို့ တှေးပွီး ကိုကို့လီးကို စုပျပေးရမယျ အကောငျးဆုံးစုပျပေးရမှာနျော နောကျပွီး အလိုးလဲ ခံရတယျ ကိုကို မဟုတျပဲ တဈခွားလူလိုးတယျပဲ တှေးပွီး ခံရမှာနျော အဲလိုတှေးလို့ရအောငျလဲ နှငျးမကျြလုံးလေးတှကေို အဝတျလေးနဲ့ ကာထား မယျ ကိုကို လို့မတှေးအောငျ ကဲဘယျလိုလဲ နှငျး”
“ဟငျ ကိုကိုကတော့ လုပျပွီ တျောတျောလေးကို နှငျးကို တဈခွားလူလီးကို စုပျစခေငျြနတောလား အလိုးခံနစေခေငျြတာလား ဟှနျ့” “နှငျးပဲ ကိုကို ဘာဖွဈစခေငျြလဲဆို ဘာလဲ နှငျးက မလုပျပေးခငျြလို့လား” “မဟုတျပါဘူးကိုကိုရယျ စိတျတော့မဆိုးလိုကျပါနဲ့ ကို ကို့အတှကျဆို နှငျးဘာမဆိုလုပျပေးမှာပါ စိတျခြ နျော နောကျမှ နှငျးကိုသာ အခဈြမလြော့နဲ့” “အိုး စိတျခလြိုကျ ခဈြကလေးရယျ ကိုကိုက ပိုပိုပွီး ခဈြလာမှာ စိတျခနြျော” “ကဲကဲ သဘောရှိပါရှငျ့ ဟုတျပွီလား” “ခဈြလိုကျတာ နှငျးရယျ အဲဆိုဆို နှငျးမကျြလုံးလေး ကာထားလိုကျနျော သိလား နှငျးကိုလိုးပေးမယျ့သူက အပွငျမှာစောငျ့နတေယျလို သဘောထားလိုကျ ရော့ နှငျးမကျြလုံးလေးကို အဝတျလေးသခြောစညျးလိုကျနျော” “ဟုတျကိုကို နှငျးသခြောလေး စညျးလိုကျမယျ” “အဲတာဆို နှငျလဲစညျးပွီးပွီဆိုတော့ ကိုကို တို့စရအောငျနျော ကိုကို သူ့ကို ချေါလိုကျတော့မယျနျော ကိုကိုက ဘေးမှာပဲ ထိုငျကွညျ့နမှောနျော နှငျးကလဲ တဈခွားနှငျးမသိတဲ့ သူစိမျးလို့ တှေးရမယျနျော” “ဟုတျ ကိုကို” ကြျောကြျောလဲ နှငျးသဘောတူပွီမို့ စရနျပွငျလိုကျတော့တယျ။ အရငျဆုံး အခနျး တံခါး ကို အပွငျမှ တဈယောကျဝငျလာသညျ့ပုံဖွငျ့ အဖှငျ့အပိတျလုပျလိုကျသညျ။ ပွီးတော့ လူနှဈယောကျပုံစံဖွငျ့ အသံဖကျြကာ စကားပွောလိုကျသညျ။
“လာ အကို ကနြေျာ့စျောလေးကတော့ အကိုလိုးတာခံဖို့ ဟိုမှာ အသငျ့ဖွဈနပွေီ ဗြ” “ဟုတျကဲ့ပါဗြ ကနြျောလဲ အကို့တို့ ချေါတာကို စောငျ့နတော အပွငျမှာ” “နှငျး ကို အကို စိတျတိုငျးကြ သဘောကသြာ လုပျပါတော့ဗြာ ကနြျောအကုနျခှငျ့ပွုပါတယျ” “ဟုတျကဲ့ အကို အကို့စျောလေးက အရမျးမိုကျတယျဗြာ အသားလေးလဲ ဖှေးနတောပဲ ဆံပငျကလဲ အရှညျကွီး အရမျးလှတာ ကနြျောစတော့ မယျနျော” “ဟုတျကဲ့ စပါ စပါ” နှငျးစိတျထဲ အတျောရယျခငျြသှားသညျ၊ ကိုကိုက အရူးကွီးလို တဈယောကျတညျးသူကပွောလိုကျ အသံဖကျြပွောလိုကျနဲ့ လုပျနတောကိုး၊ အောငျ့ထားသညျ့ကွားက ခဈခနဲ ရယျမိသှားတယျ။ “နှငျး မရယျနဲ့လေ ကိုကိုက နှငျးသခြော အမှနျလိုခံစားလို့ရအောငျ လုပျပေးနတောကိုကှာ” “ဆောရီးကိုကို နှငျးကို စိတျမဆိုးနဲ့နျော ထပျမဖွဈစရေဘူးနျော” နှငျး လဲ ကိုကို စိတျဆိုးသှားမှာ စိတျပူပွီး တကယျ တဈခွားတဈယောကျ နဲ့လိုးရတော့မှာကိုပဲ စိတျကိုနှဈထားလိုကျတော့တယျ။ ကိုကို သခြောအတညျကွီးလုပျနတောနှငျးကွောငျ့တော့ စိတျမညဈစခေငျြဘူးလေ။ “ညီမလေး နို့လေးတှေ ကကဈြကဈြလုံးလုံးလကှော အကို ကိုငျကွညျ့မယျနျော” “ဟုတျ” အသာလေးနှငျးနို့လေးတှကေိုကိုငျပွီး နို့ထိပျစူစူလေးတှေ ကို စို့ပေးနလေိုကျသညျ။
“အ..အဟငျ့…အ..အငျး..တဈမြိုးကွီးပဲကှယျ အကိုရယျ” “အရမျးစို့လို့ ညှဈလို့ကောငျးတာပဲ ညီမရယျ” “အကို နှငျးက အကို့လီးကို တဈအားစုပျခငျြနရှောတာ အကိုပေးစုပျလိုကျနျော” ဟု ကိုကြေျာ့အနဖွေငျ့ပွောလိုကျသညျ၊ “ဟုတျအကို ညီမလေး အကို့လီးကို သခြောလေး စုပျပေးနျော ညီမ ခဈြသူရှမှေ့ာ တဈခွားလူလီးကို အားရအောငျ စုပျပွလိုကျနျော” “ဟုတျအကို” ကိုကြျောလဲ နှငျး ခေါငျးကိုကိုငျကာ နှုတျခမျးနားသို့ သူ့လီးကို တပွေီ့း အသာလေး ပှတျပေးလိုကျသညျ၊ နှငျးလဲ ကာမစိတျတှေ တဈစစ တကျလာပွီမို့ နှုတျခမျးလေးကို ဟကာ ကိုလူစိမျးရဲ့ လီးကို စတငျစုပျပေးလိုကျသညျ၊ လီးထိပျလေးကို အသာလေး လြှာနဲ့ ယကျပေးပွီး တဈ ခြောငျးလုံးကို အထကျအောကျ ဖှဖှလေး ယကျပေးနပွေီး ပါးစပျဟကာ လီးတဈခြောငျးလုံငုံပွီး စုတျပေးနမေိတော့သညျ၊ တဈဖွညျးဖွညျးနဲ့ ကိုလူစိမျးရဲ့လီးကို အာခေါငျထဲထိရောကျအောငျ ဆှဲပွီး စုပျပေးနမေိတော့သညျ၊ ကိုလူစိမျးလဲ အရမျးအရသာရှိ နပွေီမို့ နှငျး စုပျပေးနတေော့တာကို မစောငျ့တော့ပဲ ခေါငျးကိုကိုငျကာ နှငျးပါစပျလေးကို အရှိနျတဖွညျးဖွညျးတငျကာ အသာလေး စလိုးပေးတော့သညျ၊ နှငျးကတော့ ကိုလူစိမျးလုပျသမြှကို စိတျလှုပျရှားပွီး ခံနမေိတော့သညျ။ “အှတျ….ပလှတျ….ပလပျ…. အှတျ… အု…..အှတျ…….” “ကောငျးလိုကျတာ ညီမလေးရယျ အရမျးကောငျးတာပဲ ကှာ ညီမလေး နှုတျခမျးလေးတှကေ နူးညံနတောပဲ တဈ ခွားလူလီးက ညီမလေး ပါးစပျကိုလိုးနတော ခံလို့ကောငျးတယျဟုတျ” နှငျးလဲ အရမျးသဘောကတြဲ့ ခံစားခကျြဖွဈလာတဲ့ အတှကျ နှုတျခမျးလေးကို တငျးနအေောငျ စုထားပွီး လီးနဲ့ ပါးစပျကိုလိုးပေးနတောကိုခံယူနရေငျး အရညျတှေ စိမျ့ထှကျလာ တော့သညျ၊ တဈခွားသူစိမျးလီးလို့ တှေးထားသညျ့အတှကျ စိတျတှလေဲ ပိုကွှနမေိသညျကို သတိထားမိနတေော့သညျ။
“အူး…အှတျ..ပွှတျ….ပွှတျ…. အူး…အု…အဟှတျ….အူး……….” လီးတဈခြောငျးလုံးကို နှငျးပါးစပျထဲတှငျအဆုံးထိ အရငျးထိ ဝငျ အောငျ စောငျ့ စောငျ့ ထညျ့လိုကျပွီ နှငျးခေါငျးကိုဖိကိုငျကာ လိုးနမေိတောသညျ၊ “အူး..အု…အု…အဟှတျ…အဟှ တျ…..အူး….အ…..အု…” “လိုးလို့ ကောငျးလိုကျတဲ့ ပါးစပျကှာ စုတျရော့ စုတျထား နငျ့ခဈြသူရှမှေ့ာ စုတျ ကောငျးလိုကျတာကှာ” နှငျး မကျြနာတဈခုလုံးနီရဲလာမှ အသကျကို ကောငျးကောငျးရှုဖို့ ခကျလာတော့တဲ့ အထိ အရငျးထိ ဖိကပျထားလိုကျတော့သညျ၊ ပွီး တော့မှ ဆှဲထုတျလိုကျပွီးနှငျးပွနျအဆငျပွလေောကျပွီဆိုမှ နောကျတဈခါထပျပွီး အားဖွငျ့ စောငျ့ထညျ့လိုကျရာ လီးကအရငျက ထကျ အားပွငျးပွငျးဖွငျ့ အရငျးထိအောငျ ဆောငျ့ဝငျသှားတော့သညျ။ “အားကောငျးလိုကျတာကှာ လီးတဈခြောငျးလုံးကို အရငျးထိ စုတျပွီး အလိုးခံနတော ခဈြသူရှေ့ စုတျနရေတာကို အရမျးကွိုကျနတောလား စုတျစမျး အငျ့ကှာအငျ့…အား…” နှငျးလဲ တရစပျ မရပျမနား စောငျ့ဝငျလာတဲ့လီးကို အားရအောငျစုပျပေးနရေငျ အဖုတျရတှေလေဲ တဈတောကျတောကျ ကိုကနြတေော့သညျ။ “ဟာ အကို တှလေ့ား အကို့ ခဈြသူ ကနြေျာ့လီးကို စုပျပွီး အဖုတျရညျတှေ ရှဲနတော အရမျးကို ရှနတောပဲ ကနြေျာ့လီးကို တျောတျောကွိုကျနတော” “ဟုတျပဗြာ နှငျးရယျ ကိုကို့ရှမှေ့ာ စုပျပေးနရေတာ အရမျးကွိုကျနတောလား အရညျတှေ ထှကျနတော အရမျးအလိုးခံခငျြနပွေီလား ဟုတျလား” “ဟုတျလား ညီမလေး နှငျး ညီမလေး ခဈြသူပွောသလို အလိုးခံခငျြနပွေီလား” နှငျး လဲ အရမျးစိတျတှေ ထလာပွီး ပါးစပျကို အားကုနျ စောငျ့လိုးတာခံနရေငျးခေါငျးကို အားရပါးရ ညိမျ့ပွလိုကျတော့သညျ၊ နှငျး စိတျထဲ လဲ အခုလို တဈခွားလူလီးကို အရမျးကွိုကျသညျ့စိတျတှဖွေဈလာပွီး ကိုကို့ ရှမှေ့ာ အသားကုနျ အလိုးခံခငျြစိတျတှေ တဈဖှားဖှား ပျေါလာတော့သညျ။
ကြျောကြျောလဲ နှငျးပါစပျထဲ ၅ ခကျြလောကျ အားနဲ့ ဖိစောငျ့ပေးလိုကျပွီး နှငျး တှံတှေးတှေ ရှဲနသေော သူ့လီးကွီးကိုဆှဲထုတျလိုကျ သညျ။ “ညီမလေး အရမျးအလိုးခံခငျြနလေား ပွကွညျ့ပါဦး တဈခွားလူလီးနဲ့ အလိုးခံခငျြနတေဲ့ အရညျရှဲနတေဲ့ အဖုတျလေးကို” နှငျးလဲ လှဲခလြိုကျပွီး ဆံပငျတှကေို ဖွနျ့ခငျးကာ ပေါငျကိုကားထားလိုကျပွီး အဖုတျလေးကိုဖွဲပွလိုကျတော့သညျ” “ဟာ ဟုတျတာပေါ့ ကွညျ့စမျး အလိုးခံခငျြနတော အရညျတှကေို အမြားကွီးပဲ အကိုကွညျ့ပါဦး အကိုကောငျမလေး ကနြေျာ့လီးကိုခံခငျြ လို့ ဖွဈနတော ဆံပငျရှညျတှကေို ဖွနျ့ထားပွီး အဖုတျကို ဖွဲထားတာ အရမျးလိုးခငျြစရာ ဗြာ” “လိုးပါဗြာ ကနြေျာ့ ခဈြသူ ကောငျမလေးကို လိုးပေးပါ နျော လိုးလိုကျပါ” “ညီမလေး အလိုးခံခငျြလား ပွော ခံခငျြလား” “ခံခငျြပါတယျရှငျ လိုးပေးပါတော့ အ ကို့လီးကွီးနဲ့ ညီမလေး ကိုလိုးပေးပါတော့ ခံခငျြလှနျးလို့ပါ” ကြျောကြျောလဲ အရမျးရှထနတေော့ ခဈြသူလေး နှငျးရဲ့ပေါငျကွာကို ဝငျကာ လီးကွီးဖွငျ့ နှငျး စောကျစိလေးနှငျ့ အဖုတျတဈခုလုံးအား သခြောပှတျကာဆှဲလိုကျသညျ။ “အား……..အကိုရယျ….ကောငျး လိုကျတာ….. အား…..အဟငျ့ …..ထညျ့လိုကျပါတော့ အကိုရယျ…..နှငျးအဖုတျထဲကို……. အား….အ….အကို့လီးကွီးထညျ့ပါ တော့….” နှငျးလဲ အရမျးကောငျးလာပွီးခါးကို ကော့ကာကော့ကာ ပေးလာလာသညျ့ အခြိနျတှငျ နှငျးအဖုတျလေးထဲသို့ လီးတဈ ခြောငျးလုံး ထိုးထညျ့ကာ ဆောငျ့ထညျ့ပဈလိုကျတော့သညျ၊ နှငျးအဖုတျလေးမှာ ခုထိ ဘယျလိုလိုးလိုး အပြိုစောကျဖုတျလေးလို အရမျးတငျးကွပျကာ အရသာထူးတှေ ပေးစှမျးနတေော့သညျ၊ လီးတဈခြောငျးလုံး အဖုတျလေးထဲသို့တဖွညျးဖွညျးတိုးဝငျလာခြိနျ တှငျ နှငျးမှာလဲ အရမျးကောငျးနကော ခါးကို ကော့တငျပွီး အံကွိတျထားလိုကျတော့သညျ၊ လီးဝငျသညျနှငျ့ နှငျးအဖုတျလေးကို ပုံမှနျ လေး စောငျ့ကာစောငျ့ကာ လိုးပေးနမေိရာ နှငျးမှာလဲ နို့တှကေိုကိုငျစှဲ ညှဈစှဲကာ ခေါငျးကို ဘယျရမျး ညာရမျးရငျး ကော့ခံနလေိုကျ တော့သညျ။”အား…..ကောငျးလိုကျတာ….အကိုရယျ…..အ…..လိုးပေးပါ….. အား…..ကောငျးတယျ ……အဟငျ့ အ…..အူး…….အ” ကြျောကြျော တဈယောကျကတော့ နှငျးအရမျးကွီး အရငျကထကျ ပိုဟော့ကာ အားရပါးရခံနသေညျကို ကွညျ့ကာ ကနြေပျနပွေီး နှငျးအဖုတျလေးမှာ လီးကို အားနဲ့ ဖိဖိညှဈပေးနသေောကွောငျ့ အကွောမြားထဲထိစိမျ့အောငျကောငျးနပွေီး အရမျးလိုးလို့ ကောငျး နတေော့သညျ။
“နှငျး….ညီမလေး….နငျ့ခဈြသူရှမှေ့ာ အကို့လီးနဲ့ အလိုးခံနရေတာကောငျးလား ဘယျလိုလဲ ပွော” “ဟငျ့…ကောငျးတယျ အကို ရယျ….အကို့လီးက အရမျးကောငျးတယျ….ကိုကို့ရှမှေ့ာ အလိုးခံနရေတာလဲ အရမျးကောငျးတယျ….. အား…..အ……” “ဟုတျလားနှငျး နှငျးကွိုကျလား ကိုကို့ရှမှေ့ာ တဈခွားလူက လိုးပေးတာခံနရေတာ အရမျးကွိုကျလား” နှငျးကိုယျတိုငျလဲ တကယျတမျးကိုကို့ရှေ့ တဈခွားလူက လိုးတာ ခံခငျြစိတျတှေ ထိနျးမရအောငျ ပွငျးပွလာတော့သညျ။ “ကောငျးတယျ ကိုကို အရမျး ကောငျးတာ ကိုကိုနဲ့ အလိုးခံရတာထကျ တဈခွားလူက ကိုကို ရှလေို့းပေးတာကို ခံရတာ ပိုပွီး ကောငျးတယျ ကိုကိုရယျ” နှငျးလဲ တ ဆဈဆဈနဲ့ အရမျးကောငျးလာကာ ပိုပိုပွီး ကော့ခံနမေိတော့သညျ၊ ကြျောကြျောကလဲ ပိုပွီး အခကျြစိပျစိပျလေး အားထညျ့ကာ ပငျ့ ဆောငျ့ပွီး လိုးပေးနလေိုကျတော့သညျ။ ကြျောကြျော လိုးခကျြ ကောငျးလှနျးသောကွောငျ့နှငျးဘယျလိုမှ ခံနိုငျစှမျးမရှိတော့ပဲ စိတျ တှေ အမွငျ့ဆုံးတကျလာကာ စောကျရညျတှေ ပနျးထုတျလိုကျပွီး အရမျးကောငျးလာကာ ပွီးဆုံးခွငျးကို ဖွဈသှားပါတော့သညျ။ “အား…နှငျးပွီးပွီ….ကောငျးလိုကျတာ…အား…အရမျးကောငျးတာပဲ….ကောငျးလိုကျတဲ့လီးကွီးရယျ….အား…အား……..” “ပွီး ပဈလိုကျ…သူစိမျးလီးကွီးနဲ့…အလိုးခံရငျး…အရတှေပေနျးပဈလိုကျ…ပွီးစမျးကှာ” “အားကောငျးလိုကျတာ..အား…ပွီးသှားပွီ… အား….” “ဟာ နှငျးပွီးသှားပွီပဲ အရမျးကောငျးပွီး ပွီးသှားတာပဲ ကှာ” ကြျောကြျောလဲ နှငျးပွီးသှားပမေယျ့ မရပျပဲ နှငျးရဲ့ နို့လေးနှဈ လုံးကို တဈဖကျ တဈခကျြစီ ဖိညှဈရငျး အားနဲ့ ဖိစို့လိုကျပွီး ဆကျတိုကျလိုးပေးနမေိတော့သညျ ရာဂစိတျမြား အရှိနျအလှနျတတျနေ သောကွောငျ့ နှငျးနို့သီးခေါငျးလေးတှမှေလညျး ထောငျထနတေော့သညျ။ ပုံမှနျမဟုတျပွငျးထနျလှ သော ကိုကို့လိုးခကျြမြားကွောငျ့ နှငျးမှာလဲ တဈခွားသူလိုးပေးနသေညျဆိုတဲ့ စိတျတှေ ကွီးစိုးလာကာ ထိုအရာကို လဲ စှဲလမျးတောငျ့တစိတျတှေ ဖွဈလာပွီး တဈ ခွားသူလီး အစဈကို ခံခငျြစိတျမြား အရမျးပွငျးပွလာတော့သညျ။
“အား…..ပွနျကောငျးလာပွနျပွီ…အကိုရယျ လိုးပါ ဆကျပွီး လိုးစောငျ့နပေေးပါ အငျး….အ….လိုးပါရှငျ……. အား…..နှငျးကို လိုးပဈ ပါ…အ….အငျ့” နှငျးခဗြာလဲ အရှကျတရားတှေ မသှေ့ားပွီး ကြျောကြျောရဲ့ လိုးဆောငျ့ခကျြမြားအောကျတှငျ တဈခွားသူလီးဟု တှေးကာ အခနျးတဈခုလုံး ဟိနျးနအေောငျ အျောညညျးရငျး အားပါးတရ ခံနမေိတော့သညျ ကြျောကြျောက နှငျးကို ကုတငျပျေါတှငျ ဖငျကုနျးခိုငျးလိုကျပွီး နောကျမှနကော နငျးရဲ့ အရညျရှဲနသေော အဖုတျဖောငျးဖောငျးလေးကို အကွောပွိုငျးပွိုငျးထနသေော လီး ကွီးကိုထိုးထညျ့ပွီး ခါးလေးကိုဆှဲကိုငျကာ အားဖွငျ့ ဆောငျ့ဆောငျ့လိုးနတေော့သညျ၊ နှငျးမှာလဲ အရငျကထကျပိုကွမျးပွီး ခဈြသူ ရှေ့ တဈခွားလူလီးဖွငျ့ အလိုးခံသညျဟုတှေးကာ ကွမျးကွမျးတမျးတမျး လိုးဆောငျ့နသေော ကြျောကြေျာ့လိုးခကျြမြားကို အရမျးခံ လို့ကောငျးနပွေီး နောကျမှာ ဆောငျ့ကာ လိုးနသေော ‌ကြျောကြျောလီးက သားအိမျထဲထိလာကာ ဖိဆောငျ့နမေိသောကွောငျ့ နှငျးခ ဗြာ မခံစားဖူးသော အရသာကို ခံစားရငျကာမဆိပျတှေ အမွငျ့ဆုံးထိုပွနျပွီးတကျလာပါတော့သညျ။“အား……အကို ကောငျး တယျ….. အား…….အကိုရယျ…အကိုရယျ…လိုးပါ နှငျးဖငျကုနျးထားပေးတာ ဆောငျ့လိုးပါ အကိုရယျ” “ဘာပွောတာလဲ နှငျး…ညီမ လေး…အကိုက ရပျလိုကျဖို့လား ….ဟငျ…..ဟုတျလားပွောပါ……….” ကြျောကြျောလဲ နှငျးခါးလေးကို ကိုငျထားပွီး ခဏ ထိုး ရပျထားပွီး မေးလိုကျသညျ။
“အာ….အကို…..ဘာလို့ ရပျလိုကျတာလဲ…. အလိုမဟုတျဘူးလေ……. ဆကျလိုးပေးပါ……ညီမ….အရမျးကောငျးလာပွီ” “ဟုတျလား…ဆကျလိုးပေးရမှလား…ညီမလေး……နငျ့ ခဈြသူကို…ပွောလိုကျလေ …အကို့ကို ဆကျလိုးပေးဖို့….” “ကိုကို…ပွော ပေးပါ….နှငျးကို ဆကျလိုးပေးဖို့….နှငျးအရမျးကောငျးနပွေီ….ဆကျလိုးပေးမှဖွဈမှာ..နှငျးအရမျးကောငျးနပွေီ…..သူ့လီးနဲ့ နှငျး အဖုတျကို ဆကျလိုးပေးတာ လိုခငျြလို့ပါ” ကြျောကြျောလဲ နှငျးအရမျးထနျနတောကို ကွညျ့ပွီး အရမျးသဘောကကြာ “လိုး ပေးလိုကျ အကို နှငျးအဖုတျကွီး ပွဲထှကျလာအောငျ အားနဲ့သာဆောငျ့လိုးပေးတော့ သူက အကို့လီးကို အရမျးကွိုကျနတော..လိုး ပဈဗြာ” “လိုးပါ အကိုရယျ နှငျးကိုလိုးပါ…ကိုကိုက လိုးခိုငျးနပွေီ နှငျးလဲ အရမျးခံခငျြနပွေီ လိုးပါနျော” “အဲတာဆိုလဲ လိုးပွီ ညီမ လေးရေ ခံစမျး အသားကုနျသာခံပတေော့” ထိုအခါမှ ကြျောကြျောက နှငျးရဲ့ တငျပါးကြျောထိရှညျသော ဆံပငျကို စုပျကိုငျပွီး ခေါငျး ကို မော့နအေောငျ ဆှဲကာ နောကျမှနပွေီးအသာကုနျ ဆောငျ့ဆောငျ့လိုးတော့သညျ၊ နှငျးမှာလဲ ကြျောကြျောရဲ့ ပွငျးထနျသော လိုး ခကျြမြားကွောငျ့ အရမျးကောငျးပွီး အဖုတျတဈခုလုံးယားတကျပွီး အကောငျးကွီး ကောငျးနတေော့သညျ။
“အား…..အကိုရယျ ကောငျးလိုကျတာ…..အရမျးကွိုကျတယျကှာ… အငျး… အငျး…..အ…..လိုးပါ…..နှငျးအဖုတျကှဲအောငျသာလိုး ပါ” “ဖွောငျး….ဖှတျ…ဖှတျ.. ဖွောငျး… ဖွောငျး….ဖတျ….ဖတျ…..ဖတျ” အသားကုနျ အားနဲ့ စောငျ့လိုးသံမြား အခနျးတဈခုလုံးကို ကယျြလောငျစှာ ဖွငျ့ ထှကျပျေါနတေော့သညျ၊ ကြျောကြျောလဲ နှငျးအဖုတျလေးရဲ့ ညှဈအားတှေ အရမျးကောငျးပွီး မခံနိုငျတော့ပဲ နှငျးအဖုတျလေးထဲကို လရညျမြားတဈဖွောဖွောဖွငျ့ဖိကပျထညျ့ကာ ပနျးထညျ့ပဈလိုကျတော့သညျ၊ နှငျးမှာလဲ ကြျောကြျောဆောငျ့ ခကျြအပွငျးစားမြားနှငျ့ ပူနှေးလှသော လရညျမြား အဖုတျထဲ တဆဈဆဈ ဖွငျ့ပနျးထညျ့နသေောကွောငျ့ နောကျထပျတခြီ ထပျပွီး ကာ စောကျရညျမြားကော လရညျမြားပါ အဖုတျတှငျးမှ စီးကနြပေါတော့သညျ။ “အား….ကောငျးလိုကျတဲ့ အဖုတျ…… အား….ရော့….နငျ့ခဈြသူရှေ့…ငါလရညျတှေ… အား…..နငျ့အဖုတျထဲ ပွညျအောငျ့ ပနျးထညျ့လိုကျပွီ…..အား” “အ..အ…ကောငျး လိုကျတာ အကိုရယျ နှေးနတောပဲ ကောငျးလိုကျတာ အဆုံထိပနျးထညျ့ပါ….ကိုကိုရှမှေ့ာ အကို့အရညျတှပေနျးထညျ့လိုကျပါ… ကောငျးတယျ အကိုရယျ” ဟု အျောညညျးနမေိတော့သညျ။ ကြျောကြျောလဲ နှငျးပျေါတှငျ ဖိမှောကျကာ နှငျးဆံပငျရှညျလေးတှကေို ဆော့ကစားရငျ အနားယူနမေိတော့သညျ။ ပွီးမှ နှငျးကို အဝတျစညျးလေး ဖယျပေးကာ နှငျး နှုတျခမျးလေးအား နမျးပေးပွီးမေးစရာ ရှိတာလေးတှေ မေးဖို့ ပွငျလိုကျသညျ။
“နှငျး ကောငျးလားနှငျး နှငျး အရမျးကောငျးပွီး ပွီးသှားတယျနျော” “ဟုတျတယျ ကိုကိုရယျ နှငျး ခု ခံစားရတာ အကောငျးဆုံးပဲ” “ဘာလို့လဲ ကိုကိုရှတေ့ဈခွားလီးနဲ့ အလိုးခံရလို့လား” “ဟုတျတယျ ကိုကို ရယျ အဲဒီ ခံစားခကျြ အရမျးကောငျးတာပဲ နှငျးတကယျ တောငျ ဖွဈခငျြစိတျတှေ ဖွဈသှားတာ အလိုးခံနတေုနျး” “ဟာအဲတာဆိုကောငျးတာပေါ့ စိတျခြ ကိုကိုက တကယျဖွဈအောငျ လုပျ တော့မှာ”“ဟငျ ဘယျလိုလုပျမှာလဲ ကိုကိုရဲ့” “နှငျးဘာမှ မတှေးနဲ့ ကိုကို ဒီတဈလောခငျထားတဲ့ မိတျဆှေ တဈယောကျရှိတယျ သူနဲ့ စကားတှေ ပွောထားတယျ နှငျးကွညျ့လိုကျ” နှငျးလဲ ကိုကို တို့ ပို့ထားသောစာတှကေိုကွညျ့ရငျး “ဟယျ ကိုကိုက အဲတာတှေ တောငျ သှားပွောထားတာလား” “ဟုတျတယျ နှငျးကိုကိုလဲ လုပျကွညျ့ခငျြတယျ နှငျးသဘောတူပွီဆို” “ဖွဈပါ့မလားကိုကို ရယျ ဘယျသူမှနျး မသိ” “သူစကားပွောတာဆိုတာ လူရညျမှနျပါပဲ ကိုကိုကတော့ တဈနရောမှာခြိနျးပွီး စကားပွောကွညျ့ကွမယျလေ အကဲခတျကွညျ့တာပေါ့ အဆငျပွမှေ ရှဆေ့ကျမယျနျော” “ကိုကို ကောငျးမယျထငျသလို လုပျပါ နှငျးကတော့ ကိုကို့သဘောပါပဲ” “ကွညျ့စမျးကောငျမလေး တဈခွားလူလီး စုပျခငျြ အလိုးခံခငျြနတော ငွငျးတောငျ မငွငျးဘူး” “ကိုကို နျော ကိုကိုပဲ အစလာလုပျပွီး တော့ နှငျးက သဘောကသြှားတာပေါ့” “စတာပါ အခဈြရယျ အဲတာကို ကိုကို သခြော plan လိုကျတော့မယျ နျော နှငျးအဲဒီနလေ့ေး ကို ရငျသာခုနျထားပတေော့” “ဟုတျကဲ့ပါ ခဈြကိုကိုရေ” ကြျောကြျောလဲ နှငျးကို ဖကျထားလိုကျပွီး ဆံနှယျလေးတှကေို ပှတျသတျ ပေးကာ နဖူစလေးကိုနမျးပေးမိလိုကျပါတော့သညျ။ နှငျးပှငျ့လှာ တဈယောကျလဲ ဘာတှမြေားကွုံတှရေ့မလဲဆိုတာကို တှေးမိပွီး အသညျးယားသလို ပြျောသလိုဖွဈလာကာ အကွိမျကွိမျပွီးထားတော့ အဖုတျလေးမှာလဲ အရညျတှေ စို့ထှကျလာမိပါတော့သညျ။
Credit-ဇေရဲ – ကျနော့်နာမည်ကဇေရဲပါ ခင်တဲ့သူတွေက ကိုဇေလို့ခေါ်ကြသလို ကိုရဲလို့လဲခေါ်ကြတယ် ကျနော်ကအလုပ်တော့ မယ်မယ်ရရမရှိပေမယ့်အိမ်ကမိသားစုကုန်စုံဆိုင်လေးမှာမိဘတွေကိုကူပြီးဘဝကိုဖြတ်သန်းနေသူတစ်ယောက်ပေါ့ အားတဲ့အချိန် တွေမှာတော့အချစ်တက္ကသိုလ်ကြီးကိုဝင်ပြီးဟိုဖတ်ဒီကြည့်နဲ့ အလုပ်ဝိုင်းလုပ်လိုက်နဲ့တစ်နေ့တစ်နေ့အချိန်တွေကုန်နေတာပေါ့ ကျနော်ကအရင်ကတည်းကဆံပင်ရှည်ကောင်မလေးတွေဆိုအရမ်းသဘောကျတာ အဲလိုဆံပင်ရှည်မလေးတွေကိုသာပိုင်ဆိုင်ရရင် ချစ်ရရင်ဆိုပြီးတစ်နေ့တစ်နေ့ စိတ်ကူးရင်းနေရတာပေါ့ ပြီးတော့တက္ကသိုလ်ထဲကသူတို့ ချစ်သူတွေ မိန်းမတွေကို ပုံတွေမျှပေးတာ တွေကိုလဲ အရမ်းသဘောကျတာ အဲလိုနဲ့တစ်နေ့တော့ဆံပင်ရှည်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ပုံကို ကျောင်းထဲက ညီကိုတစ်ယောက်က တင်လိုက်တော့အဲတာကို အရမ်းသဘောကျပြီး ပုံလေးတွေထပ်တင်ပေးဖို့ ကို သွားတောင်ပြောခဲ့သေးတာ အဲ့ဒီမှာပဲ ကျနော့်ဘဝ ထဲကို နှင်းဆိုတဲ့ကောင်မလေး ဝင်ရောက်လာခြင်းရဲ့ အစတစ်ခု ဖြစ်လာတော့တာပေါ့ဗျာ ကျနော်တင်လိုက်တဲ့ စာကိုကျောင်းထဲက ညီကိုတစ်ယောက်က မြင်သွားပြီ သူလဲ ဆံပင်ရှည်မလေးတွေနဲ့ ကွတ်ကိုး ကို အရမ်သဘောကျတယ်ဆိုတာကို PM ပို့လာခဲ့တာ တွေ သူ့နဲ့ကျနော်နဲ့ အပြန်အလှန်စကားပြောရင်းခင်မင်သွားပြီ တစ်ရက်တော့ သေချာလေးစကားပြောဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ဗျာ
me: “Hi bro ကျနော်တို့လဲ အခုမှ ပဲ ဝါသနာတူတွေ သေချာရင်းနှီးပြီးပြောဖြစ်တော့တယ်” “ဟုတ်တယ်ဗျာ ကျနော်လဲ ဆံပင်ရှည်နဲ့ ကွတ်ကိုး ကြိုက်တာချင်းတူတော့ လာပြောဖြစ်တာ”
me: “ဆံပင်ရှည်ကတော့ အရမ်းကြိုက်တာ ဆံပင်ရှည်ကြီး ကို တစ်ခါပဲ ပတ် လိုးဖူးသေးတယ် ဗျာ” “အေးဗျာ ကျွန်တော့်ကတော့ စော်ရဲ့ ဆံပင်နဲ့ပဲ လုပ်ဖူးတယ် ကျွန်တော့်စော်ရဲ့ ဆံပင်က တင်ပါးကျော်ရုံလေးပဲ ရှိတာ ဆံသားကြီး ပြီး အုံထူတယ် ဖြောင့်တယ် ဒါပေမယ့် ဆံသားကြမ်းတယ်ဗျ ဆံသားနုနုလေးနဲ့ ဆံနွယ်ရှည်ကောင်မလေးတွေကိုတော့ သဘောကျ မိပါတယ်”
me: “ဆံသားနုနု အုံထူထူ သာဆိုလို့ကတော့ဗျာ ကောင်းလိုက်မယ့်ဖြစ်ချင်း တင်ပါးကျော်ဆိုတော့ ကောင်းတာပေါ့ အတော်ပဲ ကျနော်က အဲလောက်ပိုကြိုက်တယ် အကိုကံကောင်းတာပေါ့ ဆံပင်ရှည် စော်လေးရပြီး သူ့ဆံပင်ကို ပတ်လိုးလို့ရတယ် ဆိုတော့” “ဆံသားကတော့ အထူကြီးပဲ bro ရေ လီးကိုပတ်လိုက်ရင် ဒစ်ပဲပေါ်တယ် ကျနော်ကတော့ဆော်ကို တခြားဘဲနဲ့ ကုန်းစေ ချင်တာ စည်းရုံးထားတာတော့ အဆင်ပြေနေပေမယ့် တကယ်အဆင်ပြေမယ့်သူကို မတွေ့သေးတော့ မလုပ်ဖြစ်သေးဘူးဗျ စမယ်စ မယ်နဲ့ မစဖြစ်တာ အဲ့မှာလေ ကျနော့်ကောင်မလေး ဆံပင်ပုံလေး”
me: “ဟာ အကို့စော် အသားအရည်လဲလှ လူလဲ လှမှာဗျ ဆံပင် လဲ အတော်လှတယ်ဗျ ကျနော်သူ့ဆံပင်လေးကို ကိုင်ပြီးတော့ အရမ်းကို အားရအောင် နမ်းရှိုက်ချင်တယ်ဗျာ ပြီးတော့ သူဆံပင် လေးကို လီးမှာပတ်ပြီးတော့ အသာလေး ပွတ်ပြီး ထုချင်သေးတာ ပြီးတော့ အဲလို လေး ထုနေရင်း သူအဖုတ်တစ်ခုလုံး ကို အားရ အောင် နမ်းပေး ယက်ပေးချင်လိုက်တာဗျာ သူ့ဆံပင်လေးတွေ လိုးနေရင်းနဲ့ အရမ်းကောင်းလာရင် လေ သူလီးစုပ်ပေးတာလေးခံ ရင်း သူ့အဖုတ်ရည်တွေ တစ်စက်မကျန် သောက်ပေးချင်တာဗျ သိလား ပြီးတော့ သူ့ ဆံပင်လေးတွေ ပေါ်ကိုလေ ကျနော် ပန်းပစ် ပြီး ဆံပင်အနှံ သုတ်လိမ်းပေးချင်တယ် ပြီးတော့ ကျနော် ဘီးနဲ့ သေချာလေး ဖီးပြီးတော့ အကိုလိုးတာလေးကို ကြည့်ချင်တာ ကျ နော်က သူ့ဆံပင်လေးတွေကိုင်ပြီးတော့ သူ့ပါးစပ်ထဲ လီးထည့်ထားချင်တာဗျ”
me: “အကို စိတ်တော့မရှိနဲ့ဗျာ ပုံတွေ့လို့ မနေနိုင်ဖြစ်သွားတာ ဆောရီးပဲ” “မဟုတ်တာဗျာ ကြိုက်တယ်ဗျာ ကျနော့်စော်လေးကို bro ကိုလိုးစေချင်တဲ့စိတ်တောင်ဖြစ်လာပြီ ကျနော့်စော်ကလည်း အထန်လေးဗျ ကျနော်သင်ပေးထားလို့ အောကားထဲက စော်တွေ လို လီးစုပ်တတ်တယ် bro လီးကိုဆံပင်နဲ့ပတ်ပြီး ထုပေးရင်း လီးစုပ်ပေးတာ ကြည့်ချင်တယ်ဗျာ bro အရမ်းကောင်းပြီး ကျနော့် စော် ပါးစပ်ထဲ ပီးသွားရင်လည်း ကျနော့်ရှေ့တင် လရည်သောက်ခိုင်းချင်တာ bro နဲ့ ကျနော့်စော်လေးကို အားရပါးရ လိုးလို့ သူ့ ဆံပင်တွေ ရမ်းခါနေမှာ bro လရည်တွေ သူ့ဆံပင်ပေါ်ကို ရွှဲနေအောင် ပန်းချရင် ကြည့်လို့ကောင်းလိုက်မှာဖြင့်ဗျ ကျနော့်ရှေ့တင် မဟုတ်ဘူး ကျနော့်ကွယ်ရာမှာလည်း ကျနော့်စော်လေးကို လိုးပါဗျာ အားရပါးရသာ လိုးပါ သူ ဘယ်လိုအလိုးခံခဲ့တယ်ဆိုတာ သူ ပြန်ပြောပြတာလေးလည်း နားထောင်ချင်တာဗျ သူ bro နဲ့ ဘယ်လောက်ထန်ပြီး ဘယ်လိုတွေကုန်းခဲ့တာပေါ့ဗျာ bro လီးကို စုပ်ခဲ့ တဲ့ သူ နှုတ်ခမ်းလေးကို အနမ်းတွေပေးရင်း နားထောင်ချင်တာ bro ကျနော့်စော်လေးကို ထူးထူးဆန်းဆန်းလုပ်ချင်တာလေးတွေ bro လိုးချင်တဲ့ လုပ်ချင်တာလေးတွေ ဥပမာ ဖင်လိုးချင်တာလိုမျိုးပေါ့ဗျာ ကျနော်စော်လေးကို အတွေ့အကြုံအသစ်တွေပေးချင် တာဗျ”
me: “အဲလိုဆို ကျနော်တို့ အဆင်ပြေနိုင်မယ် ထင်တယ်ဗျ စော်ကို ပြောကြည့်ပါလား အကို သူသာလက်ခံတယ်ဆို ကျနော်တို့ အပြင်မှာချိန်းပြီး စကားလေး ဘာလေး ပြောကြည့်တာပေါ့ဗျာ ကျနော်က အကိုလက်ခံနိုင်မှုနဲ့ သူလက်ခံနိင်တာကို ကြည့်ပြီး တစ်ခုခုဖြစ်လာမယ်ဆိုကျနော်ကော အကိုပါ စိတ်ချမ်းသာရမယ် လို့ ထင်တာပဲ” “အေးဗျာ အဲတာဆိုကျနော်သူ့ကို ပြောကြည့် လိုက်မယ်လေ သူလဲလက်ခံပြီးသားပါ ပြန်တော့ပြောကြည့်မယ် အဆင်ပြေရင်ပြန်ပြောမယ်ဗျနော် bye”
me: “bye bro” အဲလိုနဲ့ သူနဲ့ ကျနော်စကားတွေပြောချင်ခဲ့ပြီး သူပို့ထားတဲ့ ဆံပင်ရှည် သူ့စော်လေးပုံကိုကြည့်ရင်းနဲ့ တစ်ကြောင်း လောက်တော့ အရသာခံပြီးထုဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ သူ့စော်လေးဆံပင်ရှည်လေးကိုပတ်ပြီး ထုခွင့်ကိုသာရမယ်ဆိုလို့ တွေးတွေးပြီး သူ စာပြန်လာမယ့်နေ့လေးကို စောင့်နေမိတော့တာပေါ့ ဒီနေ့ကျော်ကျော်အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားနေသလို ဘာဆက်လုပ်သင့်လဲဆိုတာ သေချာတွေးမိနေသည်၊ မြကျွန်းညိုထဲမှတစ်ဆင့် သူစိမ်းတစ်ယောက်နဲ့အပြန်အလှန် ကွတ်ကိုးနှင့်ဆံပင်ရှည်ကြိုက်တာချင်းတူလို့ စာအပြန်အလှန်ပို့ပြောရင်း Facebook မှတစ်ဆင့် သူ့ချစ်သူဆံပင်ရှည်မလေးပုံလေးတွေကိုပြပြီးအလိုးခံနေရာကိုသူကြည့်ချင် ကြောင်းကြားချင်ကြောင်း ထိုသူကိုပြောပြခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ တကယ်ပဲသူ့ချစ်သူကောင်မလေးကိုထိုသူနဲ့လိုးမှာကိုသူ အကောင်အထည်ဖော်ချင်စိတ်တွေလဲ တစ်ဖွားဖွားဖြစ်နေတော့သည်၊ ရုံးဆင်းချိန်ရောက်သည်နှင့် သူစိတ်တွေအရမ်းစောနေပြီး သူ့ ချစ်သူလေးရှိရာကို အမြန်ဆုံးအပြေးလာခဲ့မိတော့သည်။
ဟိုတွေးဒီတွေးနှင့် ချစ်သူလေးအလုပ်ရှိရာကိုစောရောက်နေပြီး အလုပ်ဆင်းလာတာလေးကိုစောင့်နေတုန်း “ကိုကို…ကိုကျော် ရေ…..ကိုကိုရေ..!!” “အမလေး ဟာနှင်း လန့်လိုက်တာကွာ အရမ်းကြီးအော်လိုက်တာ” “အံမာ ကိုကိုကဘာတွေတွေးပြီးဘယ် တွေငေးနေတာလဲ မှန်မှန်ပြောစမ်း ကောင်မလေးတွေကိုငမ်းပြီး တွေးနေတာမဟုတ်လား” “မဟုတ်ရပါဘူးနှင်းရယ် ကိုကို က နှင်း ကိုပဲအရမ်းချစ်တာကိုတွေးလဲ နှင်းအကြောင်းပါပဲ” “ကိုကိုက ပိုပြီ တကယ်ပဲ အချွဲလေး လုပ်ချင်နေတာလား နှင်းက မချွဲရဘူး ဟွန့်” “နှင်း အလုပ်ပြီးပြီဆိုကိုကိုတို့သွားကြရအောင် အချိန်လေးရှိတုန်း လာ နှင်း” “ဟင် ဘယ်သွားဖို့လဲကိုကိုရဲ့ ကိုကိုပဲ ညနေလုပ် စရာရှိလို့ နှင်းကို အိမ်ပြန်ပို့ပြီး သွားရမယ်ဆို” “ခုက အဲတာအားလုံးထက်အရေးကြီးတာ နှင်းကို ချစ်ချင်နေတာ အချစ်ဆုံးရဲ့လာ ကိုကို ဟိုတယ်အခန်း booking လုပ်ထားတယ်” “ကိုကိုကလဲ ဇွတ်ပဲ ဘာစိတ်ကူးတွေပေါက်လို့လဲ ကိုကိုရဲ့” “လာပါ နှင်းရာ မေးမ နေပါနဲ့ နှင်းကို ချစ်ချင်လို့ အရမ်းလိုးချင်နေလို့ ကိုကို့ ချစ်သူလေးကို” “ကိုကိုကလဲ ထူးထူးဆန်းဆန်း အရမ်းကဲနေပါလား သူများ တွေ ကြားသွားမယ် ကဲကဲ သဘောပါရှင် သွား သွား ဟုတ်ပြီလား” ကျော်ကျော်လဲ ချစ်ရသူလေးလက်ကိုကိုင်ပြီး အမြန် Taxi တစ် စီးတားလိုက်ပြီး ဟိုတယ် ကိုဦးတည်လိုက်တော့တယ်၊ နှင်းကိုရင်ခွင်ထဲထည့်ထားရင်း ချစ်ရသူလေးကို သေချာထပ်စည်းရုံးဖို့ အတွက်တွေးနေမိတော့တယ်။
နှင်းပွင့်လွှာ တစ်ယောက် ကိုကျော် ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာ တွေးမရဖြစ်နေတယ်၊ ကိုကိုက အမြဲမပြောမဆိုနဲ့လုပ်တာဘာမှမရှိပါ ပဲခုချက်ချင်းသူ့ကိုဟိုတယ်ကိုခေါ်သွားတော့ထူးဆန်းနေတော့တယ်၊ ကိုကိုကသူ့ကိုချစ်သူဖြစ်ကတည်းကချစ်စနိုးနဲ့မြတ်နိုးလို့ နှင်း လို့ အမြဲခေါ်တာလေ အရင်ကလဲရည်းစားတွေထားဖူးတယ်ဆိုပေမယ့်ကိုကိုကတော့နှင်းကိုအရမ်းချစ်တာ နှင်းကလဲကိုကို့ကိုအရမ်း ချစ်တော့ကိုကိုဖြစ်စေချင်တာတွေကိုအမြဲသူဖြည့်ဆည်းဖို့ကြိုးစားတယ် ကိုကိုနဲ့မှထူးဆန်းတာတွေကိုသူလဲကြုံတွေ့ရတာတွေများ တယ် တစ်ခါမှမတွေးမိတာတွေပေါ့။ အရင်ချစ်သူတွေနဲ့တုန်းကလဲနှင်းအဖုတ်လေးကိုယက်ပေးတာ နှင်းကိုလိုးတာ နောက် နှင်းကို သူတို့လီးတွေကိုစုပ်ခိုင်းတာတွေ ရှိခဲ့ဖူးပေမယ့် ကိုကိုကမတူဘူးလေ၊ နှင်းကိုလီးစုပ်ခိုင်းတုန်းကလဲ ဒီတိုင်းစုပ်ခိုင်းတာတွေ မဟုတ်ပဲ နိုင်ငံခြားဟိုကားတွေထဲကမင်းသမီးတွေလို ဥတွေယက်တာနမ်းတာတွေ နောက်သူ့လီးကိုယက်လိုက်စုပ်လိုက်နဲ့လုပ်ခိုင်းတာတွေ လီးတစ်ချောင်းလုံးကို အရင်းထိဖိစုပ်ခိုင်းတာတွေစုံစိနေအောင်ကို သေချာသင်ပေးပြီးလုပ်ခိုငးတာ၊ နှင်းလဲ ကိုကို့ကျေးဇူး ကြောင့်နိုင်ငံခြားကားထဲကမင်းသမီးတွေထက်ကိုလီးစုပ်တာတော်တော်ကျွမ်းနေပြီ နောက်တော့လိုးတာမှ ပုံစံမျိုးစုံ နေရာမျိုးစုံမှာ ကိုလုပ်တာ နှင်းလဲကိုကိုနဲ့မှ အရှက်ဆိုတာ မရှိအောင်ကိုကုန်တော့တာပဲ။
ခုတစ်လောပိုဆိုးတာက သူနဲ့လိုးနေတုန်း နှင်းအဖုတ်ကို နှင်းကြိုက်တဲ့ဘယ်မင်းသားကယက်ပေးရင်ဘယ်လိုခံစားရလဲ နှင်းအရင် ရည်းစားကိုခုလီးပြန်စုပ်ပေးရရင်ဘယ်လိုနေမလဲ နှင်းအဖုတ်ကိုတစ်ခြားသူကလိုးနေရင်နှင်းစိတ်ထဲ ဘယ်လိုခံစားရလဲနဲ့ မေးမေး နေတော့တာလေ။ စစချင်းတော့နှင်းစိတ်ဆိုးပေမယ့်ကိုကိုက ခံစားမှုအသစ်ဆိုပြီး နှင်းကိုပြောတော့နှင်းလဲသာယာမိတာလေးတွေ ဖြစ်ဖြစ်လာတယ်၊ ကိုကိုနဲ့လိုးရင်း တစ်ခြားသူလိုးနေသလိုခံစားတတ်လာတယ်လေ ကိုကိုကတော့ အဲတာ ကွတ်ကိုး ခံစားချက်လို့ ပြောတာပဲ နှင်းကတော့နားမလည်ပါဘူး ကိုကို စိတ်ချမ်းသာရင်နှင်းကတော့ကိုကိုအတွက်ဘာမဆိုလုပ်ပေးမှာပဲလေ၊ ခုလဲ ကိုကို ချစ်ပေးတာကိုခံရတော့မှာကို သိနေလို့ကိုကို့ရင်ခွင်ထဲမှီရင်းအရည်လေးတွေတောင်စို့လာနေတာပေါ့ နှင်းလဲအတွေးတွေများနေ တုန်း “နှင်း ရောက်ပြီဆင်းမယ်လေ ဘာတွေတွေးနေတာလဲ အချစ်ရဲ့” “ရောက်ပြီလားကိုကို နှင်းလဲ ဟိုတွေးဒီတွေးနဲ့ရောက်မှန်း ကိုမသိလိုက်ဘူးဖြစ်သွားတာ” “လာနှင်း အခန်းထဲ သွားရအောင်” “ဟုတ်ကိုကို” အခန်းထဲ ရောက်ရောက်ချင်းပဲ ကိုကျော်တစ် ယောက် ချစ်သူလေးနှင်းကို သေချာကြည့်လိုက်တော့ ဒီနေ့အရမ်းတွေလှနေတော့တယ် နှင်းတို့အလုပ်က ယူနီဖောင်းကန့်သတ်ချက် မရှိတော့ ဒီနေ့နှင်း ဂါဝန်လေးနဲ့ ပြီးတော့ သူ့တင်ပါးထိရောက်တဲ့ ဆံပင်ရှည်လေးကိုဖြန့်ထားတော့ အရမ်းဆွဲဆောင်မှုရှိနေတယ်
ကိုကျော်လဲ စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ပဲ အခန်းထဲရောက်ရောက်ချင်း နှင်းကိုဆွဲပွေ့ချီလိုက်ပြီး ကုတင်ပေါ်တင်လိုက်တော့တာပေါ့ ပြီး တော့ နှင်းဂါဝန်ကိုဆွဲလှန်ပြီး နှင်းအဖုတ်လေးကို လက်နဲ့ကလိရင်း နှင်းကိုနမ်းပစ်လိုက်တော့သည် “အို ကိုကို ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ နေပါဦး ကိုယ်လက်ဆေးပြီး အဝတ်တွေချွတ်ပါရစေဦး” “မရတော့ဘူး နှင်းရယ် နှင်းလဲ အရည်လေးတွေစို့နေတာကိုး ကိုကိုလိုး ပေးတာခံချင်နေတာပေါ့ ဟုတ်လား အချစ်ရဲ့ ကိုကိုကတော့မနေနိုင်တော့ဘူးကွာ” အထိအတွေ့ကိုမလွန်ဆန်နိုင်သော နှင်းမှာလဲ ကာမစိတ်များ တစ်ဟုန်ထိုးတတ်လာပြီး ကိုကိုကတော့ နှင်းရဲ့ စောက်စိလေးကို ပွတ်ကာချေပေးရင်း နှုတ်ခမ်းကို နမ်းနေ တော့သည်၊ စောက်စိလေးကို ကလဲအရမ်းတစ်ဆစ်ဆစ်နဲ့ ကောင်းလွန်းတာကြောင့် နှင်းခဗျာကိုကို့ နှုတ်ခမ်းတွေကို မလွတ်တမ်း ပြန်ပြီးနမ်းနေမိတော့တယ်။ ကိုကိုကအနမ်းများကို ရပ်လိုက်ပြီး နှင်းပင်တီလေးကို ချွတ်ကာ ပေါင်နှစ်ဖက်ကိုဆွဲဖြဲပြီး နှင်းအဖုတ် လေးကို လျှာဖျားလေးနှင့် ပင့်ကာ ယက်ပေးလိုက် နှင်းအဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေကို စုပ်လိုက်နမ်းလိုက်နဲ့ နှင်းကလဲ ကာမစိတ်များ တရိပ်ရိပ်ပိုပို တက်လာပြီး အဖုတ်လေးတစ်ခုလုံးလဲ စောက်ရည်များရွဲစိုလာတော့သည်၊ ကိုကို့ရဲ့ ကာမခလုတ်တွေ နိုးစွတာ က နှင်း အတွက်အရမ်းကောင်းလွန်းတာကြောင့် နှင်းလဲ ဂါဝန်နဲ့ ဘော်လီတွေကို ဆွဲချွတ်ပြီး ကိုကို အကြိုက် ဆံပင်ရှည်တွေကို ကုတင်ပေါ် ဖြန့်ထားလိုက်ပြီး နို့တွေကို ဆွဲညှစ်ကာ ခါးကို ကော့ကာ ကော့ကာ ပေးပြီး ကိုကိုယက်ပေးတာကို အပြည့်အဝ ခံစားနေမိ တော့သည်။
“ကိုကိုရယ်….. ဘယ်လိုတွေတောင်လုပ်တတ်တာလဲကွာ…….နှင်းအရည်တွေအရမ်းထွက်နေပြီကွာ……. ကိုကိုရယ်…ကောင်းလိုက် တာ…အား အ ဖိစုတ်‌ပေးပါကိုကိုရယ် အစေ့လေးကိုလဲ …ကောင်းလိုက်တာကိုကိုရယ်…အရမ်းကောင်းတယ်ကွာ” “အား… အ..အင့်…အဟင့် ….ကောင်းလိုက်တာ…ဖိယက်ပစ် ကိုကို… အား….ကောင်းတယ် အ….အိ….” ကိုကိုကတော့ စောက်စိလေးကို ဖိ ဖိယက်နေပြီး စောက်ဖုတ်လေးထဲသို့ လက်နှစ်ချောင်းပူးထည့်ကာ ထိုးထည့်လိုက်တော့သည်။ “အား…ကောင်းလာပြီ…ကိုကို ရယ်…အ..လုပ်ပါ…အစေ့လေးကိုစုပ်…ဟုတ်တယ်..ဖိစုပ်ပေး…ကိုကိုလက်နဲ့လိုးပေး…ကောင်းလိုက်တာ.. အား….အား….အ… အင်း…. လုပ်ပါကိုကိုရယ်…နှင်းအရမ်းကောင်းလာပြီ…ပြီးတော့မယ်…ကားပေါ်မှကတည်းကခံချင်နေတာ..လုပ်ပါ…အား….ပြီး ပြီ..ကိုကိုရယ်…အ.အ. ပြီးပြီကွာ..အဟင့်…အား…” နှင်းခဗျာ နို့တွေကိုဖိညှစ်ဆွဲရင်း ခါးကို ဆက်တိုက်ဆက်တိုက် ကော့တင်ကာ ကိုကို့ခေါင်းကို ပေါင်နှင့်ညှပ်ရင်း အရည်တွေ ရွှဲနေအောင်ထွက်ကာ ကာမရဲ့ အမြင့်ဆုံး ပြီးဆုံးချင်းကို ရောက်သွားပါတော့သည်၊ ကိုကိုက နှင်းပြီးသွားတော့မှ နှင်းနှုတ်ခမ်းလေးကို အဖုတ်ရည်များပေနေသော သူ့နှုတ်ခမ်းဖြင့် မက်မက်မောမော လာနမ်းပေးပြီး နှင်းကလဲ နှင်း အဖုတ်ရည်များနှင့် စိုနေသော့ကိုကို့နှုတ်ခမ်းကို ဖိစုပ်ကာနမ်းရင်း အမောဖြေနေပါတော့သည်။ ကျော်ကျော်လဲ သူ ယက်ပေးတာကိုခံပြီး အရမ်းဟော့ကာ ပြီးသွားသောနှင်း နှုတ်ခမ်းလေးကို နမ်းရင်း ထရပ်လိုက်သည်၊ နှင်းကတော့ သူ့ကို ချစ်ရည် လဲ့သော အကြည့်များနှင့် ကြည့်နေပါတော့သည်၊ ကျော်ကျော် လဲ ဒီနေ့တော့နှင်းကိုတစ်ခြားသူနှင့်တကယ်အလိုးခံရသလိုခံစားရ အောင်လိုးပေးပြီး နှင်းကိုအပြင်မှာတကယ် သူစိမ်းနှင့်လိုးချင်စိတ်ဖြစ်လာအောင် လုပ်မည် ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်တော့သည်။
“နှင်း အချစ် ကောင်းရဲ့လားဟင် ကိုကို ယက်ပေးတာ” “ကိုကိုရယ် ကောင်းတာမှ နှင်းအဖုတ်လေးနဲ့ ကိုကို့ လျှာလေးကပ်သာထား လိုက်ချင်တော့တယ် ကိုကို သိလား” “ကဲ နှင်းအရမ်းကောင်းသွားပြီဆိုတော့ ကိုကို့ ကို ဘယ်လို ကျေးဇူးပြန်ဆပ်မှာလဲ ပြော မဟုတ်ရင် ကိုကို က မလုပ်ပေးတော့ပဲ နေလိုက်မှာ” “ကိုကိုရယ် အဲလိုတော့ မလုပ်ပါနဲ့ ကိုကိုသာမလုပ်ပေးတော့ရင် နှင်းတော့ ခံ ချင်လွန်းလို့ သေတောင် သေမလား မသိဘူး ကိုကို့သဘော နော် ကိုကို ဘာဖြစ်စေချင်လဲ ပြော” “အဲတာဆို ကိုကို အရင်က နှင်းကို ပြောဖူးသလိုလေ နှင်းကို တစ်ခြားလူနဲ့လိုးတာလေးကို ကိုကို သဘောကျတယ်လို့ ပြောတာ အဲဒါအခု နှင်းက ကိုကို့ ကို ကိုကို မဟုတ်ပဲ တစ်ခြားလူလို့ တွေးပြီး ကိုကို့လီးကို စုပ်ပေးရမယ် အကောင်းဆုံးစုပ်ပေးရမှာနော် နောက်ပြီး အလိုးလဲ ခံရတယ် ကိုကို မဟုတ်ပဲ တစ်ခြားလူလိုးတယ်ပဲ တွေးပြီး ခံရမှာနော် အဲလိုတွေးလို့ရအောင်လဲ နှင်းမျက်လုံးလေးတွေကို အဝတ်လေးနဲ့ ကာထား မယ် ကိုကို လို့မတွေးအောင် ကဲဘယ်လိုလဲ နှင်း”
“ဟင် ကိုကိုကတော့ လုပ်ပြီ တော်တော်လေးကို နှင်းကို တစ်ခြားလူလီးကို စုပ်စေချင်နေတာလား အလိုးခံနေစေချင်တာလား ဟွန့်” “နှင်းပဲ ကိုကို ဘာဖြစ်စေချင်လဲဆို ဘာလဲ နှင်းက မလုပ်ပေးချင်လို့လား” “မဟုတ်ပါဘူးကိုကိုရယ် စိတ်တော့မဆိုးလိုက်ပါနဲ့ ကို ကို့အတွက်ဆို နှင်းဘာမဆိုလုပ်ပေးမှာပါ စိတ်ချ နော် နောက်မှ နှင်းကိုသာ အချစ်မလျော့နဲ့” “အိုး စိတ်ချလိုက် ချစ်ကလေးရယ် ကိုကိုက ပိုပိုပြီး ချစ်လာမှာ စိတ်ချနော်” “ကဲကဲ သဘောရှိပါရှင့် ဟုတ်ပြီလား” “ချစ်လိုက်တာ နှင်းရယ် အဲဆိုဆို နှင်းမျက်လုံးလေး ကာထားလိုက်နော် သိလား နှင်းကိုလိုးပေးမယ့်သူက အပြင်မှာစောင့်နေတယ်လို သဘောထားလိုက် ရော့ နှင်းမျက်လုံးလေးကို အဝတ်လေးသေချာစည်းလိုက်နော်” “ဟုတ်ကိုကို နှင်းသေချာလေး စည်းလိုက်မယ်” “အဲတာဆို နှင်လဲစည်းပြီးပြီဆိုတော့ ကိုကို တို့စရအောင်နော် ကိုကို သူ့ကို ခေါ်လိုက်တော့မယ်နော် ကိုကိုက ဘေးမှာပဲ ထိုင်ကြည့်နေမှာနော် နှင်းကလဲ တစ်ခြားနှင်းမသိတဲ့ သူစိမ်းလို့ တွေးရမယ်နော်” “ဟုတ် ကိုကို” ကျော်ကျော်လဲ နှင်းသဘောတူပြီမို့ စရန်ပြင်လိုက်တော့တယ်။ အရင်ဆုံး အခန်း တံခါး ကို အပြင်မှ တစ်ယောက်ဝင်လာသည့်ပုံဖြင့် အဖွင့်အပိတ်လုပ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ လူနှစ်ယောက်ပုံစံဖြင့် အသံဖျက်ကာ စကားပြောလိုက်သည်။
“လာ အကို ကျနော့်စော်လေးကတော့ အကိုလိုးတာခံဖို့ ဟိုမှာ အသင့်ဖြစ်နေပြီ ဗျ” “ဟုတ်ကဲ့ပါဗျ ကျနော်လဲ အကို့တို့ ခေါ်တာကို စောင့်နေတာ အပြင်မှာ” “နှင်း ကို အကို စိတ်တိုင်းကျ သဘောကျသာ လုပ်ပါတော့ဗျာ ကျနော်အကုန်ခွင့်ပြုပါတယ်” “ဟုတ်ကဲ့ အကို အကို့စော်လေးက အရမ်းမိုက်တယ်ဗျာ အသားလေးလဲ ဖွေးနေတာပဲ ဆံပင်ကလဲ အရှည်ကြီး အရမ်းလှတာ ကျနော်စတော့ မယ်နော်” “ဟုတ်ကဲ့ စပါ စပါ” နှင်းစိတ်ထဲ အတော်ရယ်ချင်သွားသည်၊ ကိုကိုက အရူးကြီးလို တစ်ယောက်တည်းသူကပြောလိုက် အသံဖျက်ပြောလိုက်နဲ့ လုပ်နေတာကိုး၊ အောင့်ထားသည့်ကြားက ခစ်ခနဲ ရယ်မိသွားတယ်။ “နှင်း မရယ်နဲ့လေ ကိုကိုက နှင်းသေချာ အမှန်လိုခံစားလို့ရအောင် လုပ်ပေးနေတာကိုကွာ” “ဆောရီးကိုကို နှင်းကို စိတ်မဆိုးနဲ့နော် ထပ်မဖြစ်စေရဘူးနော်” နှင်း လဲ ကိုကို စိတ်ဆိုးသွားမှာ စိတ်ပူပြီး တကယ် တစ်ခြားတစ်ယောက် နဲ့လိုးရတော့မှာကိုပဲ စိတ်ကိုနှစ်ထားလိုက်တော့တယ်။ ကိုကို သေချာအတည်ကြီးလုပ်နေတာနှင်းကြောင့်တော့ စိတ်မညစ်စေချင်ဘူးလေ။ “ညီမလေး နို့လေးတွေ ကကျစ်ကျစ်လုံးလုံးလေကွာ အကို ကိုင်ကြည့်မယ်နော်” “ဟုတ်” အသာလေးနှင်းနို့လေးတွေကိုကိုင်ပြီး နို့ထိပ်စူစူလေးတွေ ကို စို့ပေးနေလိုက်သည်။
“အ..အဟင့်…အ..အင်း..တစ်မျိုးကြီးပဲကွယ် အကိုရယ်” “အရမ်းစို့လို့ ညှစ်လို့ကောင်းတာပဲ ညီမရယ်” “အကို နှင်းက အကို့လီးကို တစ်အားစုပ်ချင်နေရှာတာ အကိုပေးစုပ်လိုက်နော်” ဟု ကိုကျော့်အနေဖြင့်ပြောလိုက်သည်၊ “ဟုတ်အကို ညီမလေး အကို့လီးကို သေချာလေး စုပ်ပေးနော် ညီမ ချစ်သူရှေ့မှာ တစ်ခြားလူလီးကို အားရအောင် စုပ်ပြလိုက်နော်” “ဟုတ်အကို” ကိုကျော်လဲ နှင်း ခေါင်းကိုကိုင်ကာ နှုတ်ခမ်းနားသို့ သူ့လီးကို တေ့ပြီး အသာလေး ပွတ်ပေးလိုက်သည်၊ နှင်းလဲ ကာမစိတ်တွေ တစ်စစ တက်လာပြီမို့ နှုတ်ခမ်းလေးကို ဟကာ ကိုလူစိမ်းရဲ့ လီးကို စတင်စုပ်ပေးလိုက်သည်၊ လီးထိပ်လေးကို အသာလေး လျှာနဲ့ ယက်ပေးပြီး တစ် ချောင်းလုံးကို အထက်အောက် ဖွဖွလေး ယက်ပေးနေပြီး ပါးစပ်ဟကာ လီးတစ်ချောင်းလုံငုံပြီး စုတ်ပေးနေမိတော့သည်၊ တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကိုလူစိမ်းရဲ့လီးကို အာခေါင်ထဲထိရောက်အောင် ဆွဲပြီး စုပ်ပေးနေမိတော့သည်၊ ကိုလူစိမ်းလဲ အရမ်းအရသာရှိ နေပြီမို့ နှင်း စုပ်ပေးနေတော့တာကို မစောင့်တော့ပဲ ခေါင်းကိုကိုင်ကာ နှင်းပါစပ်လေးကို အရှိန်တဖြည်းဖြည်းတင်ကာ အသာလေး စလိုးပေးတော့သည်၊ နှင်းကတော့ ကိုလူစိမ်းလုပ်သမျှကို စိတ်လှုပ်ရှားပြီး ခံနေမိတော့သည်။ “အွတ်….ပလွတ်….ပလပ်…. အွတ်… အု…..အွတ်…….” “ကောင်းလိုက်တာ ညီမလေးရယ် အရမ်းကောင်းတာပဲ ကွာ ညီမလေး နှုတ်ခမ်းလေးတွေက နူးညံနေတာပဲ တစ် ခြားလူလီးက ညီမလေး ပါးစပ်ကိုလိုးနေတာ ခံလို့ကောင်းတယ်ဟုတ်” နှင်းလဲ အရမ်းသဘောကျတဲ့ ခံစားချက်ဖြစ်လာတဲ့ အတွက် နှုတ်ခမ်းလေးကို တင်းနေအောင် စုထားပြီး လီးနဲ့ ပါးစပ်ကိုလိုးပေးနေတာကိုခံယူနေရင်း အရည်တွေ စိမ့်ထွက်လာ တော့သည်၊ တစ်ခြားသူစိမ်းလီးလို့ တွေးထားသည့်အတွက် စိတ်တွေလဲ ပိုကြွနေမိသည်ကို သတိထားမိနေတော့သည်။
“အူး…အွတ်..ပြွတ်….ပြွတ်…. အူး…အု…အဟွတ်….အူး……….” လီးတစ်ချောင်းလုံးကို နှင်းပါးစပ်ထဲတွင်အဆုံးထိ အရင်းထိ ဝင် အောင် စောင့် စောင့် ထည့်လိုက်ပြီ နှင်းခေါင်းကိုဖိကိုင်ကာ လိုးနေမိတောသည်၊ “အူး..အု…အု…အဟွတ်…အဟွ တ်…..အူး….အ…..အု…” “လိုးလို့ ကောင်းလိုက်တဲ့ ပါးစပ်ကွာ စုတ်ရော့ စုတ်ထား နင့်ချစ်သူရှေ့မှာ စုတ် ကောင်းလိုက်တာကွာ” နှင်း မျက်နာတစ်ခုလုံးနီရဲလာမှ အသက်ကို ကောင်းကောင်းရှုဖို့ ခက်လာတော့တဲ့ အထိ အရင်းထိ ဖိကပ်ထားလိုက်တော့သည်၊ ပြီး တော့မှ ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးနှင်းပြန်အဆင်ပြေလောက်ပြီဆိုမှ နောက်တစ်ခါထပ်ပြီး အားဖြင့် စောင့်ထည့်လိုက်ရာ လီးကအရင်က ထက် အားပြင်းပြင်းဖြင့် အရင်းထိအောင် ဆောင့်ဝင်သွားတော့သည်။ “အားကောင်းလိုက်တာကွာ လီးတစ်ချောင်းလုံးကို အရင်းထိ စုတ်ပြီး အလိုးခံနေတာ ချစ်သူရှေ့ စုတ်နေရတာကို အရမ်းကြိုက်နေတာလား စုတ်စမ်း အင့်ကွာအင့်…အား…” နှင်းလဲ တရစပ် မရပ်မနား စောင့်ဝင်လာတဲ့လီးကို အားရအောင်စုပ်ပေးနေရင် အဖုတ်ရေတွေလဲ တစ်တောက်တောက် ကိုကျနေတော့သည်။ “ဟာ အကို တွေ့လား အကို့ ချစ်သူ ကျနော့်လီးကို စုပ်ပြီး အဖုတ်ရည်တွေ ရွှဲနေတာ အရမ်းကို ရွနေတာပဲ ကျနော့်လီးကို တော်တော်ကြိုက်နေတာ” “ဟုတ်ပဗျာ နှင်းရယ် ကိုကို့ရှေ့မှာ စုပ်ပေးနေရတာ အရမ်းကြိုက်နေတာလား အရည်တွေ ထွက်နေတာ အရမ်းအလိုးခံချင်နေပြီလား ဟုတ်လား” “ဟုတ်လား ညီမလေး နှင်း ညီမလေး ချစ်သူပြောသလို အလိုးခံချင်နေပြီလား” နှင်း လဲ အရမ်းစိတ်တွေ ထလာပြီး ပါးစပ်ကို အားကုန် စောင့်လိုးတာခံနေရင်းခေါင်းကို အားရပါးရ ညိမ့်ပြလိုက်တော့သည်၊ နှင်း စိတ်ထဲ လဲ အခုလို တစ်ခြားလူလီးကို အရမ်းကြိုက်သည့်စိတ်တွေဖြစ်လာပြီး ကိုကို့ ရှေ့မှာ အသားကုန် အလိုးခံချင်စိတ်တွေ တစ်ဖွားဖွား ပေါ်လာတော့သည်။
ကျော်ကျော်လဲ နှင်းပါစပ်ထဲ ၅ ချက်လောက် အားနဲ့ ဖိစောင့်ပေးလိုက်ပြီး နှင်း တွံတွေးတွေ ရွှဲနေသော သူ့လီးကြီးကိုဆွဲထုတ်လိုက် သည်။ “ညီမလေး အရမ်းအလိုးခံချင်နေလား ပြကြည့်ပါဦး တစ်ခြားလူလီးနဲ့ အလိုးခံချင်နေတဲ့ အရည်ရွှဲနေတဲ့ အဖုတ်လေးကို” နှင်းလဲ လှဲချလိုက်ပြီး ဆံပင်တွေကို ဖြန့်ခင်းကာ ပေါင်ကိုကားထားလိုက်ပြီး အဖုတ်လေးကိုဖြဲပြလိုက်တော့သည်” “ဟာ ဟုတ်တာပေါ့ ကြည့်စမ်း အလိုးခံချင်နေတာ အရည်တွေကို အများကြီးပဲ အကိုကြည့်ပါဦး အကိုကောင်မလေး ကျနော့်လီးကိုခံချင် လို့ ဖြစ်နေတာ ဆံပင်ရှည်တွေကို ဖြန့်ထားပြီး အဖုတ်ကို ဖြဲထားတာ အရမ်းလိုးချင်စရာ ဗျာ” “လိုးပါဗျာ ကျနော့် ချစ်သူ ကောင်မလေးကို လိုးပေးပါ နော် လိုးလိုက်ပါ” “ညီမလေး အလိုးခံချင်လား ပြော ခံချင်လား” “ခံချင်ပါတယ်ရှင် လိုးပေးပါတော့ အ ကို့လီးကြီးနဲ့ ညီမလေး ကိုလိုးပေးပါတော့ ခံချင်လွန်းလို့ပါ” ကျော်ကျော်လဲ အရမ်းရွထနေတော့ ချစ်သူလေး နှင်းရဲ့ပေါင်ကြာကို ဝင်ကာ လီးကြီးဖြင့် နှင်း စောက်စိလေးနှင့် အဖုတ်တစ်ခုလုံးအား သေချာပွတ်ကာဆွဲလိုက်သည်။ “အား……..အကိုရယ်….ကောင်း လိုက်တာ….. အား…..အဟင့် …..ထည့်လိုက်ပါတော့ အကိုရယ်…..နှင်းအဖုတ်ထဲကို……. အား….အ….အကို့လီးကြီးထည့်ပါ တော့….” နှင်းလဲ အရမ်းကောင်းလာပြီးခါးကို ကော့ကာကော့ကာ ပေးလာလာသည့် အချိန်တွင် နှင်းအဖုတ်လေးထဲသို့ လီးတစ် ချောင်းလုံး ထိုးထည့်ကာ ဆောင့်ထည့်ပစ်လိုက်တော့သည်၊ နှင်းအဖုတ်လေးမှာ ခုထိ ဘယ်လိုလိုးလိုး အပျိုစောက်ဖုတ်လေးလို အရမ်းတင်းကြပ်ကာ အရသာထူးတွေ ပေးစွမ်းနေတော့သည်၊ လီးတစ်ချောင်းလုံး အဖုတ်လေးထဲသို့တဖြည်းဖြည်းတိုးဝင်လာချိန် တွင် နှင်းမှာလဲ အရမ်းကောင်းနေကာ ခါးကို ကော့တင်ပြီး အံကြိတ်ထားလိုက်တော့သည်၊ လီးဝင်သည်နှင့် နှင်းအဖုတ်လေးကို ပုံမှန် လေး စောင့်ကာစောင့်ကာ လိုးပေးနေမိရာ နှင်းမှာလဲ နို့တွေကိုကိုင်စွဲ ညှစ်စွဲကာ ခေါင်းကို ဘယ်ရမ်း ညာရမ်းရင်း ကော့ခံနေလိုက် တော့သည်။”အား…..ကောင်းလိုက်တာ….အကိုရယ်…..အ…..လိုးပေးပါ….. အား…..ကောင်းတယ် ……အဟင့် အ…..အူး…….အ” ကျော်ကျော် တစ်ယောက်ကတော့ နှင်းအရမ်းကြီး အရင်ကထက် ပိုဟော့ကာ အားရပါးရခံနေသည်ကို ကြည့်ကာ ကျေနပ်နေပြီး နှင်းအဖုတ်လေးမှာ လီးကို အားနဲ့ ဖိဖိညှစ်ပေးနေသောကြောင့် အကြောများထဲထိစိမ့်အောင်ကောင်းနေပြီး အရမ်းလိုးလို့ ကောင်း နေတော့သည်။
“နှင်း….ညီမလေး….နင့်ချစ်သူရှေ့မှာ အကို့လီးနဲ့ အလိုးခံနေရတာကောင်းလား ဘယ်လိုလဲ ပြော” “ဟင့်…ကောင်းတယ် အကို ရယ်….အကို့လီးက အရမ်းကောင်းတယ်….ကိုကို့ရှေ့မှာ အလိုးခံနေရတာလဲ အရမ်းကောင်းတယ်….. အား…..အ……” “ဟုတ်လားနှင်း နှင်းကြိုက်လား ကိုကို့ရှေ့မှာ တစ်ခြားလူက လိုးပေးတာခံနေရတာ အရမ်းကြိုက်လား” နှင်းကိုယ်တိုင်လဲ တကယ်တမ်းကိုကို့ရှေ့ တစ်ခြားလူက လိုးတာ ခံချင်စိတ်တွေ ထိန်းမရအောင် ပြင်းပြလာတော့သည်။ “ကောင်းတယ် ကိုကို အရမ်း ကောင်းတာ ကိုကိုနဲ့ အလိုးခံရတာထက် တစ်ခြားလူက ကိုကို ရှေ့လိုးပေးတာကို ခံရတာ ပိုပြီး ကောင်းတယ် ကိုကိုရယ်” နှင်းလဲ တ ဆစ်ဆစ်နဲ့ အရမ်းကောင်းလာကာ ပိုပိုပြီး ကော့ခံနေမိတော့သည်၊ ကျော်ကျော်ကလဲ ပိုပြီး အချက်စိပ်စိပ်လေး အားထည့်ကာ ပင့် ဆောင့်ပြီး လိုးပေးနေလိုက်တော့သည်။ ကျော်ကျော် လိုးချက် ကောင်းလွန်းသောကြောင့်နှင်းဘယ်လိုမှ ခံနိုင်စွမ်းမရှိတော့ပဲ စိတ် တွေ အမြင့်ဆုံးတက်လာကာ စောက်ရည်တွေ ပန်းထုတ်လိုက်ပြီး အရမ်းကောင်းလာကာ ပြီးဆုံးခြင်းကို ဖြစ်သွားပါတော့သည်။ “အား…နှင်းပြီးပြီ….ကောင်းလိုက်တာ…အား…အရမ်းကောင်းတာပဲ….ကောင်းလိုက်တဲ့လီးကြီးရယ်….အား…အား……..” “ပြီး ပစ်လိုက်…သူစိမ်းလီးကြီးနဲ့…အလိုးခံရင်း…အရေတွေပန်းပစ်လိုက်…ပြီးစမ်းကွာ” “အားကောင်းလိုက်တာ..အား…ပြီးသွားပြီ… အား….” “ဟာ နှင်းပြီးသွားပြီပဲ အရမ်းကောင်းပြီး ပြီးသွားတာပဲ ကွာ” ကျော်ကျော်လဲ နှင်းပြီးသွားပေမယ့် မရပ်ပဲ နှင်းရဲ့ နို့လေးနှစ် လုံးကို တစ်ဖက် တစ်ချက်စီ ဖိညှစ်ရင်း အားနဲ့ ဖိစို့လိုက်ပြီး ဆက်တိုက်လိုးပေးနေမိတော့သည် ရာဂစိတ်များ အရှိန်အလွန်တတ်နေ သောကြောင့် နှင်းနို့သီးခေါင်းလေးတွေမှလည်း ထောင်ထနေတော့သည်။ ပုံမှန်မဟုတ်ပြင်းထန်လှ သော ကိုကို့လိုးချက်များကြောင့် နှင်းမှာလဲ တစ်ခြားသူလိုးပေးနေသည်ဆိုတဲ့ စိတ်တွေ ကြီးစိုးလာကာ ထိုအရာကို လဲ စွဲလမ်းတောင့်တစိတ်တွေ ဖြစ်လာပြီး တစ် ခြားသူလီး အစစ်ကို ခံချင်စိတ်များ အရမ်းပြင်းပြလာတော့သည်။
“အား…..ပြန်ကောင်းလာပြန်ပြီ…အကိုရယ် လိုးပါ ဆက်ပြီး လိုးစောင့်နေပေးပါ အင်း….အ….လိုးပါရှင်……. အား…..နှင်းကို လိုးပစ် ပါ…အ….အင့်” နှင်းခဗျာလဲ အရှက်တရားတွေ မေ့သွားပြီး ကျော်ကျော်ရဲ့ လိုးဆောင့်ချက်များအောက်တွင် တစ်ခြားသူလီးဟု တွေးကာ အခန်းတစ်ခုလုံး ဟိန်းနေအောင် အော်ညည်းရင်း အားပါးတရ ခံနေမိတော့သည် ကျော်ကျော်က နှင်းကို ကုတင်ပေါ်တွင် ဖင်ကုန်းခိုင်းလိုက်ပြီး နောက်မှနေကာ နင်းရဲ့ အရည်ရွှဲနေသော အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးကို အကြောပြိုင်းပြိုင်းထနေသော လီး ကြီးကိုထိုးထည့်ပြီး ခါးလေးကိုဆွဲကိုင်ကာ အားဖြင့် ဆောင့်ဆောင့်လိုးနေတော့သည်၊ နှင်းမှာလဲ အရင်ကထက်ပိုကြမ်းပြီး ချစ်သူ ရှေ့ တစ်ခြားလူလီးဖြင့် အလိုးခံသည်ဟုတွေးကာ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း လိုးဆောင့်နေသော ကျော်ကျော့်လိုးချက်များကို အရမ်းခံ လို့ကောင်းနေပြီး နောက်မှာ ဆောင့်ကာ လိုးနေသော ‌ကျော်ကျော်လီးက သားအိမ်ထဲထိလာကာ ဖိဆောင့်နေမိသောကြောင့် နှင်းခ ဗျာ မခံစားဖူးသော အရသာကို ခံစားရင်ကာမဆိပ်တွေ အမြင့်ဆုံးထိုပြန်ပြီးတက်လာပါတော့သည်။“အား……အကို ကောင်း တယ်….. အား…….အကိုရယ်…အကိုရယ်…လိုးပါ နှင်းဖင်ကုန်းထားပေးတာ ဆောင့်လိုးပါ အကိုရယ်” “ဘာပြောတာလဲ နှင်း…ညီမ လေး…အကိုက ရပ်လိုက်ဖို့လား ….ဟင်…..ဟုတ်လားပြောပါ……….” ကျော်ကျော်လဲ နှင်းခါးလေးကို ကိုင်ထားပြီး ခဏ ထိုး ရပ်ထားပြီး မေးလိုက်သည်။
“အာ….အကို…..ဘာလို့ ရပ်လိုက်တာလဲ…. အလိုမဟုတ်ဘူးလေ……. ဆက်လိုးပေးပါ……ညီမ….အရမ်းကောင်းလာပြီ” “ဟုတ်လား…ဆက်လိုးပေးရမှလား…ညီမလေး……နင့် ချစ်သူကို…ပြောလိုက်လေ …အကို့ကို ဆက်လိုးပေးဖို့….” “ကိုကို…ပြော ပေးပါ….နှင်းကို ဆက်လိုးပေးဖို့….နှင်းအရမ်းကောင်းနေပြီ….ဆက်လိုးပေးမှဖြစ်မှာ..နှင်းအရမ်းကောင်းနေပြီ…..သူ့လီးနဲ့ နှင်း အဖုတ်ကို ဆက်လိုးပေးတာ လိုချင်လို့ပါ” ကျော်ကျော်လဲ နှင်းအရမ်းထန်နေတာကို ကြည့်ပြီး အရမ်းသဘောကျကာ “လိုး ပေးလိုက် အကို နှင်းအဖုတ်ကြီး ပြဲထွက်လာအောင် အားနဲ့သာဆောင့်လိုးပေးတော့ သူက အကို့လီးကို အရမ်းကြိုက်နေတာ..လိုး ပစ်ဗျာ” “လိုးပါ အကိုရယ် နှင်းကိုလိုးပါ…ကိုကိုက လိုးခိုင်းနေပြီ နှင်းလဲ အရမ်းခံချင်နေပြီ လိုးပါနော်” “အဲတာဆိုလဲ လိုးပြီ ညီမ လေးရေ ခံစမ်း အသားကုန်သာခံပေတော့” ထိုအခါမှ ကျော်ကျော်က နှင်းရဲ့ တင်ပါးကျော်ထိရှည်သော ဆံပင်ကို စုပ်ကိုင်ပြီး ခေါင်း ကို မော့နေအောင် ဆွဲကာ နောက်မှနေပြီးအသာကုန် ဆောင့်ဆောင့်လိုးတော့သည်၊ နှင်းမှာလဲ ကျော်ကျော်ရဲ့ ပြင်းထန်သော လိုး ချက်များကြောင့် အရမ်းကောင်းပြီး အဖုတ်တစ်ခုလုံးယားတက်ပြီး အကောင်းကြီး ကောင်းနေတော့သည်။
“အား…..အကိုရယ် ကောင်းလိုက်တာ…..အရမ်းကြိုက်တယ်ကွာ… အင်း… အင်း…..အ…..လိုးပါ…..နှင်းအဖုတ်ကွဲအောင်သာလိုး ပါ” “ဖြောင်း….ဖွတ်…ဖွတ်.. ဖြောင်း… ဖြောင်း….ဖတ်….ဖတ်…..ဖတ်” အသားကုန် အားနဲ့ စောင့်လိုးသံများ အခန်းတစ်ခုလုံးကို ကျယ်လောင်စွာ ဖြင့် ထွက်ပေါ်နေတော့သည်၊ ကျော်ကျော်လဲ နှင်းအဖုတ်လေးရဲ့ ညှစ်အားတွေ အရမ်းကောင်းပြီး မခံနိုင်တော့ပဲ နှင်းအဖုတ်လေးထဲကို လရည်များတစ်ဖြောဖြောဖြင့်ဖိကပ်ထည့်ကာ ပန်းထည့်ပစ်လိုက်တော့သည်၊ နှင်းမှာလဲ ကျော်ကျော်ဆောင့် ချက်အပြင်းစားများနှင့် ပူနွေးလှသော လရည်များ အဖုတ်ထဲ တဆစ်ဆစ် ဖြင့်ပန်းထည့်နေသောကြောင့် နောက်ထပ်တချီ ထပ်ပြီး ကာ စောက်ရည်များကော လရည်များပါ အဖုတ်တွင်းမှ စီးကျနေပါတော့သည်။ “အား….ကောင်းလိုက်တဲ့ အဖုတ်…… အား….ရော့….နင့်ချစ်သူရှေ့…ငါလရည်တွေ… အား…..နင့်အဖုတ်ထဲ ပြည်အောင့် ပန်းထည့်လိုက်ပြီ…..အား” “အ..အ…ကောင်း လိုက်တာ အကိုရယ် နွေးနေတာပဲ ကောင်းလိုက်တာ အဆုံထိပန်းထည့်ပါ….ကိုကိုရှေ့မှာ အကို့အရည်တွေပန်းထည့်လိုက်ပါ… ကောင်းတယ် အကိုရယ်” ဟု အော်ညည်းနေမိတော့သည်။ ကျော်ကျော်လဲ နှင်းပေါ်တွင် ဖိမှောက်ကာ နှင်းဆံပင်ရှည်လေးတွေကို ဆော့ကစားရင် အနားယူနေမိတော့သည်။ ပြီးမှ နှင်းကို အဝတ်စည်းလေး ဖယ်ပေးကာ နှင်း နှုတ်ခမ်းလေးအား နမ်းပေးပြီးမေးစရာ ရှိတာလေးတွေ မေးဖို့ ပြင်လိုက်သည်။
“နှင်း ကောင်းလားနှင်း နှင်း အရမ်းကောင်းပြီး ပြီးသွားတယ်နော်” “ဟုတ်တယ် ကိုကိုရယ် နှင်း ခု ခံစားရတာ အကောင်းဆုံးပဲ” “ဘာလို့လဲ ကိုကိုရှေ့တစ်ခြားလီးနဲ့ အလိုးခံရလို့လား” “ဟုတ်တယ် ကိုကို ရယ် အဲဒီ ခံစားချက် အရမ်းကောင်းတာပဲ နှင်းတကယ် တောင် ဖြစ်ချင်စိတ်တွေ ဖြစ်သွားတာ အလိုးခံနေတုန်း” “ဟာအဲတာဆိုကောင်းတာပေါ့ စိတ်ချ ကိုကိုက တကယ်ဖြစ်အောင် လုပ် တော့မှာ”“ဟင် ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ ကိုကိုရဲ့” “နှင်းဘာမှ မတွေးနဲ့ ကိုကို ဒီတစ်လောခင်ထားတဲ့ မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်ရှိတယ် သူနဲ့ စကားတွေ ပြောထားတယ် နှင်းကြည့်လိုက်” နှင်းလဲ ကိုကို တို့ ပို့ထားသောစာတွေကိုကြည့်ရင်း “ဟယ် ကိုကိုက အဲတာတွေ တောင် သွားပြောထားတာလား” “ဟုတ်တယ် နှင်းကိုကိုလဲ လုပ်ကြည့်ချင်တယ် နှင်းသဘောတူပြီဆို” “ဖြစ်ပါ့မလားကိုကို ရယ် ဘယ်သူမှန်း မသိ” “သူစကားပြောတာဆိုတာ လူရည်မွန်ပါပဲ ကိုကိုကတော့ တစ်နေရာမှာချိန်းပြီး စကားပြောကြည့်ကြမယ်လေ အကဲခတ်ကြည့်တာပေါ့ အဆင်ပြေမှ ရှေ့ဆက်မယ်နော်” “ကိုကို ကောင်းမယ်ထင်သလို လုပ်ပါ နှင်းကတော့ ကိုကို့သဘောပါပဲ” “ကြည့်စမ်းကောင်မလေး တစ်ခြားလူလီး စုပ်ချင် အလိုးခံချင်နေတာ ငြင်းတောင် မငြင်းဘူး” “ကိုကို နော် ကိုကိုပဲ အစလာလုပ်ပြီး တော့ နှင်းက သဘောကျသွားတာပေါ့” “စတာပါ အချစ်ရယ် အဲတာကို ကိုကို သေချာ plan လိုက်တော့မယ် နော် နှင်းအဲဒီနေ့လေး ကို ရင်သာခုန်ထားပေတော့” “ဟုတ်ကဲ့ပါ ချစ်ကိုကိုရေ” ကျော်ကျော်လဲ နှင်းကို ဖက်ထားလိုက်ပြီး ဆံနွယ်လေးတွေကို ပွတ်သတ် ပေးကာ နဖူစလေးကိုနမ်းပေးမိလိုက်ပါတော့သည်။ နှင်းပွင့်လွှာ တစ်ယောက်လဲ ဘာတွေများကြုံတွေ့ရမလဲဆိုတာကို တွေးမိပြီး အသည်းယားသလို ပျော်သလိုဖြစ်လာကာ အကြိမ်ကြိမ်ပြီးထားတော့ အဖုတ်လေးမှာလဲ အရည်တွေ စို့ထွက်လာမိပါတော့သည်။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ပုရိသတို့ရဲ့ နှငျး
ကမြ နဲ့ ဆိုကျကားသမားမြား..